ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမဲဆန္ဒနယ် အားလုံးဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဆိုပါလားနအဖအာဏာပိုင်များပါတီလို့သာ ပြောပြီရွေးကောက်ပွဲဝင်လိုက်ပါတော့
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအနေဖြင့် တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ မဲဆန္ဒနယ်အားလုံးတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင် မည်ဖြစ်ပြီး မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလအတွင်း မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအလုပ်ကို သီးခြားလုပ်ဆောင်မည်မဟုတ်ဟု ၄င်းပါတီမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက သြဂုတ် ၃၀ရက်တွင် ပြောသည်။ “ပါတီက ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းကနေ အမွေခံအခြေပြုပြီး ဖွဲ့စည်းထားတဲပါတီဖြစ်တယ်။
မဲဆွယ်စည်းရုံးတဲ့အနေအထားမျိုး တမင်လိုက်ပြီး မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးမလုပ်ပါဘူး။ လူထုအကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေ လုပ်မယ်။ အဲဒီလိုလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ပေးရင်းနဲ့ လူထုက သူတို့အတွက် လုပ်ပေးနေတာသိပြီးတော့ နားလည်ပြီးကိုယ့်ဘက်ပါလာမယ်။ ဒီလိုပဲဆောင်ရွက်ပါမယ်”ဟု ၄င်းကပြောသည်။ အဆိုပါ ပါတီသည် ပါတီအဖြစ် အသွင်မပြောင်းမီ အသင်းအဖြစ် တည်ရှိစဉ်က အသင်းဝင်အင်အား ၂၆ သန်းကျော်ရှိရာ ၄င်းတို့ထဲမှ နည်းလမ်းဥပဒေနှင့် မညီသည့် ၀န်ထမ်းနှင့် ကျောင်းသားများကို ပါတီဝင်အဖြစ် ၀င်ခွင့်မပေးခဲ့ကြောင်း၊ ၀န်ထမ်းမှ ပါတီဝင်ဖြစ်ချင်သူများမှာ ၀န်ထန်းအဖြစ်မှ နုတ်ထွက်၍ ပါတီသို့ ၀င်ရောက်လျှင် ခန့်အပ်ခဲ့ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် လက်ရှိတစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ၀င်နေဆဲဖြစ်၍ ပါတီဝင်အင်အား ၁၆သန်းထိဖြစ်လာရန် မှန်းထားကြောင်းသိရသည်။
ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီသည် လွှတ်တော် ၃ရပ်ရှိ မဲဆန္ဒနယ်အားလုံးတွင် နေရာလပ်မရှိ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အချို့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများမှာ ကိုယ့်စရိတ်ကိုယ်စိုက်ထုတ်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ငွေကြေး မတတ်နိုင်သော ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုမူ ပါတီမှ စိုက်ထုတ်ပေးကြောင်း Popular News ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Saturday, September 04, 2010 Links to this post
ဝန်ကြီးဌာန အဆောက်အအုံများကို ပုဂ္ဂလိက စီးပွားရေး အဖွဲ့အစည်းများက အများဆုံး ဝယ်ယူထား
ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပြုလုပ်ရေးကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ပုဂ္ဂလိကနှင့် စီးပွားရေး အဖွဲ့အစည်းများသို့ အပြီးအပြတ် လွှဲပြောင်းရောင်းချပေးသည့် အဆောက်အအုံများတွင် အစိုးရ၀န်ကြီးဌာနရုံး အဆောက်အအုံများ အများဆုံးပါဝင်နေကြောင်း သိရှိရသည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ် မေလမှစတင်၍ ရန်ကုန်မြို့ရှိ ၀န်ကြီးဌာနရုံးများ နေပြည်တော်သို့ ပြောင်းရွှေ့သွားသဖြင့် ကျန်နေခဲ့သည့် အစိုးရ၀န်ကြီးဌာန အဆောက်အအုံများကို ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန မြို့ရွာနှင့် အိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနက ခေတ္တလွှဲပြောင်းရယူထားပြီး ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပြုလုပ်ရေးကော်မရှင်က ပုဂ္ဂလိကများနှင့် စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများသို့ လွှဲပြောင်းရောင်းချပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံပိုင် အဆောက်အဦများကို အပြီးအပြတ်ဝယ်ယူခဲ့မှုများတွင် ပုဂ္ဂလိကနှင့် ကုမ္ပဏီကြီးများထက် စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများ အများဆုံး ဖြစ်နေကြောင်း တရားဝင် ထုတ်ပြန်ချက်များအရ သိရသည်။ တရားဝင် ထုတ်ပြန်ချက်များအရ ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၀န်းကျင်ခန့်မှ စတင်၍ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေး ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ပေါ်ရှိ ကမ်းနားလမ်း ခြောက်ထပ်ရုံး အဆောက်အဦ၊ တာမွေမြို့နယ်ရှိ အမျိုးသားစာကြည့်တိုက် အဆောက်အဦ၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းပေါ်ရှိ ပြည်သူ့ကုန်တိုက် အဆောက်အဦများကို မြန်မာစီးပွားရေးဦးပိုင် လီမိတက်မှ အပြီးအပြတ် ၀ယ်ယူထားပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိ၌ အကြီးဆုံးဖြစ်သည့် တန် ၃၅၀ ကျ ဆန်စက်၊ အထည်ချုပ်စက်ရုံကိုလည်း ၀ယ်ယူထားကြောင်း သိရသည်။ ယင်းအပြင် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ထူးဒရေးဒင်း၊ ရွှေတောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကုမ္ပဏီ၊ လွယ်ဟိန်းကုမ္ပဏီတို့က ကန်သာယာဆေးရုံ၊ အချိုရည်စက်ရုံ၊ မြန်မာအသံနှင့် ရုပ်မြင်သံကြား အဆောက်အဦအနီးရှိ MRTV3complex တို့ကို အပြီးအပြတ် ၀ယ်ယူထားသည်ဟုလည်း သိရသည်။ ပုဂ္ဂလိကသို့ လွှဲပြောင်း ရောင်းချပေးနေသည့် အဆောက်အဦများတွင် အင်းလျားလမ်း၊ သံလွင်လမ်း၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ အလုံလမ်းပေါ်ရှိ လုံးချင်း အဆောက်အအုံများလည်း ပါရှိကြောင်း ၂၀၁၀ ခုနှစ် Bi Weekly Eleven ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
မဲဆောက်တွင် မြန်မာအလုပ်သမား (၇၀၀) ခန့် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရ၊ အချို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရဆဲ
ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် မဲဆောက်မြို့ တွင် ပြီးခဲ့သည့် ညက တည်းက မြန်မာအလုပ်သမားများထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်
နေခဲ့သော်လည်းထိုင်းရဲနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးတို့ က၊ယနေ့ တနေကုန် ပိုက်စိုက် တိုက်ရှာဖွေ ဖမ်းဆီးမှုများ ကြောင့်ရွေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားများ၇၀၀ ခန့် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကြောင်းသိရှိရသည်။
ဘန်ကောက်မှ ထိုင်း၇ဲနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ တို့ လာရောက်ဖမ်းဆီးမည်ကိုကြားသိရသဖြင့် ထိုင်းလုပ်ငန်း
ရခိုင်အလုပ်သမားလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ ကတာဝန်ခံ ကိုထက်ခေါင်က“ညဉ့်ကကျနော်တို့ ရုံးမှာ အလုပ်သမား ငါးဆယ်
ကျော်တယ်လာ အိပ်ကြတာ၊ ဒီနေ့ နေ့ လည်ပိုင်းမှာတော့အခြား လုံခြုံတဲ့ နေရာတွေ ကိုပို့ ပေးထားတယ်။ ဒီနေ့ 
မဲဆောက်မြင်ကွင်းပိုပြောရရင် စစ်ဖြစ်နေတဲ့မြို့ တစ်မြို့ လိုပဲ၊အလုပ်သမား တွေခမျာ ဟိုဘက် ပြေးလည်း မလုံခြုံ
ကိုကူညီနေတာ၊ခုထိ ပြေးကြတုန်းပဲဟု ” သတင်းရေးသားချိန်ညနေ၆နာရီကျော်တွင်ပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့ အထိတ်တလန့် ဖြစ်လောက် အောင်လိုက်လံ ရှာဖွေဖမ်းဆီးခြင်းမှာ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် အဘီဆေ့၏
နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားများ ရှာဖွေ ဖမ်းဆီးထောင်ချရေး ကို အကောင်အထည် ဖေါ်ခြင်းကြောင်း JACBA
“ထိုင်းတွေက ကိုယ်လက်ကို ကိုယ်ရိုက်ချိုးတာပဲဗျ။နိုင်ငံတကာလုပ်ငန်းရှင်တွေကရော ထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေက
ရော မြန်မာအလုပ်အလုပ်သမားတွေဟာဈေးပေါတယ်၊ အလုပ်ကောင်းတယ်၊ အကြမ်းခံတယ်၊ အန္တရာယ်များတဲ့
အလုပ်တွေမှာလည်းလုပ်ရဲတယ်ဆိုပြီးပြောကြတယ်။အဓိကပြောချင်တာက အလုပ်သမားတွေကို ဘတ်မရှိလို့ဖမ်းရင်၊ဘတ်လုပ်မပေးတဲ့သူဌေးကိုလည်းဖမ်းလေ၊အလုပ် သမားတွေကို ရှာပြီး ဖမ်းသလို၊ အလုပ်ရှင် ကိုလည်း ရှာဖမ်းလေ၊ဒါမှတရားမျှတမမှုရှိတော့မှာပေါ့” ဟုဖွင့်ဆိုသည်။
ယခုအကြိမ် အတွင်း ထိုင်းလုပ်ငန်းရှင် အချို့တို့ကသူတို့ အလုပ် သမားများအား၊ ဆန်များ၊ ကြက်ဥများ၊ မာမား
ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုတ်များ လာရောက်ပေးဆောင်သည် ဟုသိရှိရသည်။ မဲဆောက် အခြေစိုက် ကူညီေ၇းအဖွဲ့ တို့ကမြန်မာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်ကိုမြတ်မင်းတို့ကူညီပေးထားသည့်နေရာဖက်သို့ မည်သူမျှ မရောက်ရှိ ကြောင်း ပြောသည်။
“ကျနော်တိုအနီးအနားက ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်း ထဲမှာလူ ၁၆၀၀ လောက် ရှိမယ် ထင်တယ်၊ဒီတခါ ထိုင်းလုပ်ငန်း ရှင်တွေကောင်းတယ်လို့ပြောလို့၇တယ်။ကျနော့်အထင်ပြောရရင်၊မြန်မာပြည်မှာရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲဆန္ဒရှင် တွေလိုလိုဖမ်းပို့သလား၊ယာယီပတ်စပိုမလုပ်လို့ကြလို့ဆိုရင် ဘာကြောင့် မလုပ်ကြ သလဲဆိုတဲ့ အနေ အထားမှန်ကိုသိအောင်မကြိုးစားကြပဲ၊မလုပ်ကောင်းရလားဆိုပြီးဖမ်းတာနည်းမှန်လမ်းမှန် မဟုတ်ဘူးလေ၊အဖြေ မှန်မဟုတ်ဘူး။ ဒီဘက်ကို ရောက်နေတဲ့ ဗမာတွေအထဲ မြန်မာပြည်မှာ မှတ်ပုံတင် မလုပ်ဖူးတဲ့ လူတွေအများကြီးပဲ” ဟုထောက်ပြပြောဆိုသည်။
အလုပ်သမားအရေးဆောင်ရွက်သူများကပြောသည်။ အချို့ ကမူ စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့အထိ လူဖမ်းပွဲကြီး ရှိနေမည် ဟု ပြောကြသည်။
ယမန်နေ့ က ချင်းမိုင်မြို့နယ်၊အလုပ်အလုပ်သမားကြီးကြပ်ေ၇းရုံးမှ နဖ၀ဒီဖိနန် ဆိုသူနှင့်နယ်ခြားစောင့်တပ်အမှတ် ၃၃တို့ ပူးပေါင်း၍ ဆီဖုန်းရပ်ကွက် အာစထော်လမ်းရှိ လုပ်ငန်းခွင့်ကိုဝင်ရောက်ဖမ်းဆီလိုက်သည်။
ယမန်နေ့ နေ့ လည်ပိုင်းက စစ်သား အင်အား ၅၀ ကျော်ခန့် ဖြင့်စီးနင်း ၀င်ရောက် ဖမ်းဆီးရာ မြန်မာအလုပ်သမား၂၀၀ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။ထိုအထဲတွင်နေထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်စာရွက်စာတမ်းမရှိ သည့်အလုပ်သမား ၃၀ ကျော်ကိုမူနယ်စပ်သို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဒေလီနယူးသတင်းစာ တွင်ရေးသားဖေါ်ပြထားသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း သန်းချီရှိသည့် မြန်မာ အလုပ်သမားများတွင် တရားဝင် နေထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင် ခွင့်မရှိသူများ သဖြင့်၊ထိုင်းအာဏာပိုင်များ၏ဖမ်းဆီးပြန်ပို့ခြင်း၊ငွေညှစ်ခြင်းကိုနေ့စဉ်ခံနေရဆဲဖြစ်သည်။ဖမ်းလိုက်၊ပြေးလိုက်၊ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းပြန်လာလိုက်သံသရာမှာ နှစ်ပေါင်းမည်မျှကြာမည်မသိနိုင်သေးကြောင်း မဲဆောက်မှ အလုပ် သမားအရေး လုပ်သူများက သုံးသပ်ပြောဆိုနေကြသည်။
တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွှတ်ရေးပါတီ ဒေသ ခေါင်းဆောင်များကို ဖမ်းဆီးပြီး ထောင် ၃ နှစ်စီချ
စစ်ကိုင်းတိုင်း ၊ အထက်ပိုင်း ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်မှာ တစညပါတီက ဒေသဆိုင်ရာ ခေါင်းဆောင် ၅ ဦး ကို ဖမ်းဆီးပြီးတရားစစ်ဆေးတာ မရှိပဲ ခန္တီး အကျဉ်းထောင်မှာ ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်စီ ချမှတ်လိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ် ။
ပြီးခဲ့တဲ့လ ၁၈ ရက်နေ့က ဟုမ္မလင်းမြို့နယ် တစညပါတီ ဥက္ကဌ ဦးသက်ခိုင်နဲ့ ဦးကာသိန်း ၊ ဦးနီဖောင် ၊ ဦးစီပေါ့ ၊ ဦးယာပေါ့ တို့ကို ဟုမ္မလင်းမြို့နယ် နောင်ပင်ရွာမှာ ဟုမ္မလင်းမြို့နယ် အခြေစိုက် ခလရ ၂၂၂ က ဗိုလ်ဇော်ဇော် ဦးဆောင်တဲ့ စစ်ကြောင်းကနေ ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ် ။
သူတို့အားလုံဟာ နာဂတောင်တန်း စည်းရုံးရေး တာဝန်ယူထားရသူတွေဖြစ်ကြောင်း နဲ့ အဖမ်းခံရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ သက်ဆိုင်ရာရဲ့ ခွင့်ပြုချက်မရပဲနဲ့ ခန္တီးမြို့နယ် အတွင်းက နာဂ တိုင်းရင်းသားတွေကို စည်းရုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဆက်လက်ွှပီး သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေက နာဂတောင်တန်းမှာ တစည အနေနဲ့ စည်းရုံးရေး လုပ်ငန်းတွေ ရပ်ဆိုင်းထားဖို့ တားဆီးထားတယ်လို့ အိန္ဒိယ-မြန်မာ နယ်စပ်မှာ နေထိုင်ပြီး နာဂ လူ့အခွင့်အရေး လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ကိုမိုးကြည်က RFA ကို ပြောပါတယ် ။
“တစညပါတီက ပါတီစည်းရုံးရေးမှူးတွေကို စည်းရုံးရေး မဆင်းဖို့ အခု တစည ဥက္ကဌ ဦးသက်ခိုင် ကို ဖမ်းထားတယ် ။ အဲဒါကြောင့် စည်းရုံးရေး မဝင်ဖို့ မြို့နယ်တိုင်းကို တားထားတယ် ။ အဓိကကတော့ လေရှီး၊ လဟယ် ၊ နန်းယွန်း အကုန်လုံး အဲဒီမြို့နယ်တွေအထဲမှာ ခဏ စည်းရုံးရေး ရပ်ဆိုင်းပါဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုး အကြောင်းကြားထားတာ။”
လာမဲ့ စစ်အစိုးရပြုလုပ်မဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို နာဂတောင်တန်းမှာ တစည ပါတီ နဲ့ ကြံခိုင်ရေးပါတီ နှစ်ပါတီတည်းပဲ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပြီး လက်ရှိအနေအထားအရ တစည ပါတီ က အသာစီးရတဲ့ပုံ ရှိတယ်လို့ ကိုမိုးကြည်က RFA ကို ပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်း တစည ပါတီက နာဂတောင်တန်း နန်းယွန်းမြို့မှာ အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ် ။
အဲဒီပြီးခဲ့တဲ့ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာပဲ ဒေသခံ နာဂတောင်တန်း တိုးတက်ရေးပါတီက လေရှီး ၊ လဟယ် စတဲ့မြို့ ၂ မြို့မှာအနိုင်ရရှိခဲ့ပေမဲ့ အခုအခါမှာတော့ လာမဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဟာ တရားမျှတမှုမရှိ နိုင်တဲ့အတွက် ပါတီ မှတ်ပုံတင်တာ ပြန်မလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့တွင် အရုဏ်ဦးမှာ ဖူးသည့်ကြာ ရုပ်ရှင်ကားနှင့် ပက်သက်သည့် ဆန္ဒပြမည့် အစီအစဉ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် အတွင်းရှိ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများကစစ်အစိုးရ၏ သမိုင်းကြောင်း အမှန်များကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားရန် ကြိုးပမ်ခဲ့သော စစ်အာဏာရှင် ၀ါဒဖြန့်ချီရေး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်သည့် အရုဏ်ဦးမှာ ဖူးသည့်ကြာ ဇာတ်ကားနှင့် ၎င်းဇာတ်ကားတွင်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ကြသူများ၊ ပံ့ပိုးကူညီကြသူများကို ဆန့်ကျင်ရှုတ်ချ သော သဘောထား ကြေညာချက် များကို သိရှိနိုင်ရန်အတွက် ပေးပို့လိုက်ပါသည်။
ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့တွင် ဆန္ဒပြမည့် အစီအစဉ်။
ဆက်သွယ်ရန်။ ။ ကိုစိန်ထွန်း (၆၅၀ ၃၈၇ ၆၈၉၄)၊ ကိုမိုးကျော် (၆၅၀ ၈၃၄ ၀၁၈၄)၊
ကိုနေလင်း (၄၁၅ ၃၆၈ ၃၉၁၄)
Statement of the LA Organizers for Burma Los Angeles
ပေးပို့ ပေးသော ကိုမိုးကျော်သူ အားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.။
မကြောက်တရားနဲ မဲမပေးကြဖို့ ဦးဝင်းတင် ပြည်သူကိုထပ်မံတိုက်တွန်းပြောဆို
၂.၉.၂၀၁၀ရက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ ပဲခူးရေးဘေး ဒုက္ခသယ်များအားသွားရောက်ဆန်လှူ
ဓာတ်ပုံ ပေးပို့ ပေးသော သူငယ်ချင်း ကိုလူချော အားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.။
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) နှင့် မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် လူမှုရေးထောက်ပံ့မှုတွေကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နေသော ကိုကျော်သူရဲ့ ပြောကြားချက်...
(၃. ၉. ၂၀၁၀) ရက်နေ့ တွင် လွတ်လပ်သည်အာရှအသံ (RFA) သတင်းဌာနမှ ထုတ်လွှင့်ခဲ့သော သတင်း တစ်ခု အားကို ကျော်သူ မှ ပြန်လည် ရှင်းလင်း တင်ပြ ခဲ့ပါသည်.။
အနုပညာသည် လေးဦး ဟာသ သရုပ်ဆောင် ညီဂျော် ၊ အမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်များသန်းသန်းစိုး၊ ဆုရွှန်းလဲ၊့ ဂွမ်းပုံကြီး ၊အား ရုပ်ရှင် ရိုက်ကူး ခွင့်များ ပိတ်ပင် လိုက်သည် ဟု ကိုကျော်သူ မှ ပြောကြား သည်ဆို သည်မှာ မှားယွင်း နေပါသည်။
အမှန်မှာ...နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)အား သွားရောက် လုပ်အားပေး သင်တန်းပေးခြင်းများကို ပိတ်ပင်
ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်များ လူမှုရေး လုပ်လိုပါက ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှ သဘောတူ ထောက်ခံချက် ရပါမှလုပ် ရမည့် သဘောပင် ဖြစ်တော့သည်။ ( ရုပ်ရှင်သည် ပြည်သူ့ အတွက်....တဲ့ဗျာ။)
လွတ်လပ်သည်အာရှအသံ (RFA) ထုတ်လွှင် ခဲ့သောသတင်း
ရုပ်ရှင်ဗီဒီယို သရုပ်ဆောင် ၄ ဦးကို အနုပညာလုပ်ငန်းပိတ်ပင်
လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ကိုင်နေတဲ့ အကယ်ဒမီဆုရှင် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ဦးကျော်သူ ဦးဆောင်ဖွင့်လှစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင်သင်တန်းမှာ သွားရောက် အကူအညီ ပေးခဲ့တဲ့အတွက် ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယို သရုပ်ဆောင် ၄ ဦးကို မြန်မာစစ်အစိုးရ လက်အောက်ခံ ရုပ်ရှင် အစည်းအရုံးက ရုပ်ရှင် အနုပညာလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခွင့် ပိတ်ပင်လိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အပိတ်ခံရတဲ့ အနုပညာရှင် ၄ ဦးကတော့ ဟာသသရုပ်ဆောင် ညီဂျော်၊ အမျိုးသမီး သရုပ်ဆောင် သန်းသန်းစိုး၊ ဂွမ်းပုံနဲ့ ဆုရွှန်းလဲ့တို့ ဖြစ်တယ်လို့ ရန်ကုန် အနုပညာ အသိုင်းအဝိုင်းက RFA ကို ပြောပါတယ်။
အခမဲ့ သရုပ်ဆောင်သင်တန်း ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ ရန်ကုန် နာရေးကူညီမှုအသင်းက ဦးကျော်သူကတော့ အခုလို လူမှုရေးလုပ်တဲ့ အနုပညာရှင်တွေကို လုပ်ကိုင်စားသောက်ခွင့် ပိတ်တာဟာ အနုပညာရှင်တွေရဲ့ လူမှုရေးစိတ်ဓာတ်ကို ဖျက်ဆီးရာရောက်သလို လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံက အနုပညာရှင်တွေရဲ့ ဘဝဟာ အစိုးရအကြိုက်လိုက်နိုိုင်မှ လုပ်ကိုင်စားလို့ ရမဲ့ အနေအထား ဖြစ်နေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Friday, September 03, 2010 Links to this post
မြန်မာနိုင်ငံ စာပေနှင့်စာနယ်ဇင်း အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ဒု-ဥက္ကဋ္ဌအပါအ၀င် ဗဟိုအမှုဆောင် လေးဦး နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲတွင် အမတ်လောင်းများအဖြစ် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန်
မြန်မာနိုင်ငံစာပေနှင့် စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ အပါအ၀င် ဗဟိုအမှုဆောင် လေးဦးတို့သည် နိုဝင်ဘာ ရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်း အမတ်လောင်းများအဖြစ် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည် ဖြစ်သဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံစာပေနှင့် စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့မှ သြဂုတ် ၂၇ ရက်မှ စတင် နုတ်ထွက်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံစာပေနှင့် စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့မှ နုတ်ထွက်ခွင့်ပြုသူများမှာ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ခ၊ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ(၁) ဒေါက်တာတင်ထွန်းဦး၊ ဗဟိုအမှုဆောင်များ ဖြစ်ကြသည့် ဦးအောင်ငြိမ်း၊ ဦးလှထွန်းတို့ လေးဦးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ “မြန်မာနိုင်ငံစာပေနှင့် စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းမှာ အဖွဲ့ဝင်တွေက ပါတီနိုင်ငံရေး ကင်းရှင်းရမယ်လို့ ပါထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံစာပေနှင့် စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့က ပါတီနိုင်ငံရေးကင်းရှင်းတဲ့ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်နေပါတယ်။ ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌအပါအ၀င် အဖွဲ့ဝင်လေးဦးအနေနဲ့ စာပေနှင့်စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့ရဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကို လေးစားလို့ သူတို့ဆန္ဒနဲ့ နုတ်ထွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ကလဲ သူတို့ရဲ့ဆန္ဒကို လက်ခံတဲ့အတွက် နုတ်ထွက်ခွင့်ပြုလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အဖွဲ့အနေနဲ့က နိုင်ငံရေးကင်းရှင်းသော လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ် ဆက်လက်ရပ်တည်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု မြန်မာနိုင်ငံစာပေနှင့် စာနယ်ဇင်းအတွင်းရေးမှူး ဦးကိုကို (ကိုကို-စက်မှုတက္ကသိုလ်)က ပြောသည်။ ယင်းအဖွဲ့မှ နုတ်ထွက်ခွင့်ပြုထားသည့် ဦးတင်ခသည် အမျိုးသားလွှတ်တော် အမတ်လောင်းအတွက် မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်မှလည်းကောင်း၊ ဒေါက်တာတင်ထွန်းဦးသည် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အမတ်လောင်းအဖြစ် မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်မှ လည်းကောင်း၊ ဦးအောင်ငြိမ်းသည် အမျိုးသားလွှတ်တော် အမတ်လောင်းအတွက် မကွေးတိုင်း ရေနံချောင်းမြို့မှလည်းကောင်း၊ ဦးလှထွန်းသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်အတွက် ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်မှလည်းကောင်း အမတ်လောင်းအဖြစ် အသီးသီးဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း(မ်) ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအခွန်ဦးစီးဌာနမှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအား ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်သည့်နှုန်းထား သုံးဆနီးပါးမြင့်တက်ကောက်ခံ
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအား ကောက်ခံနေသော ဝင်ငွေခွန်နှုန်းထားများအပေါ်တွင် အခွန်စည်းကြပ်ပုံစံ ပြောင်းလဲလိုက်သောကြောင့် ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်သည့် နှုန်းထားများမှာ သုံးဆနီးပါးမြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အခွန်ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။ ယခုကဲ့သို့ ဝင်ငွေခွန်စည်းကြပ်သည့်နှုန်းများ မြင့်တက်လာရခြင်းမှာ အခွန်စည်းကြပ်သူများက ယခင်ကထက် သေချာစွာမေးမြန်း၍ စည်းကြပ်လာခဲ့ခြင်းများကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု အထက်ပါပုဂ္ဂိုလ်က ပြောကြားသည်။ “အရင်က လုပ်ငန်းရှင်တွေကို သေချာမေးတာမရှိဘူး။ အခုသေချာမေးပြီး စည်းကြပ်တဲ့အခါ အခြေအနေ ကွာသွားတာကြောင့် အရင်ကထက် ဝင်ငွေသုံးဆလောက် ပိုပြရတော့ သုံးဆတိုးကောက်တယ်ထင်တဲ့ သဘောပဲ ” ဟု ယင်းကပြောသည်။ လက်ရှိလုပ်ဆောင်လျက်ရှိသော ပုံစံမှာဝင်ငွေများကို သေချာစွာ စိစစ်၍ ဖော်ထုတ်နိုင်သည့် သဘောဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ယခင်က အခွန်နှုန်းထား နည်းရခြင်းမှာ စည်းကြပ်သည့် နေရာတွင် ပေါ့ဆခဲ့ခြင်းကြောင့် အခွန်နှုန်းများ များစွာလျော့ကျခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် အခွန်ကိုစိစစ်မှု အားနည်းခြင်း မရှိတော့၍ တိုးမြှင့်လာခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း အထက်ပါပုဂ္ဂိုလ်က ပြောကြားသည်။ အဆိုပါ အခွန်နှုန်းထားများကို ဇူလိုင်လမှ စတင်၍ စည်းကြပ်သည့်ပုံစံ ပြောင်းလဲရန် သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း7Day News ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
ရှမ်းပြည်နယ် မိုင်းယန်းမြို့နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ်ဘီးလင်းမြို့နယ်တို့၌ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် ရေကြီးမှုများဖြစ်ပွား
ရှမ်းပြည်နယ် မိုင်းယန်းမြို့နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ် ဘီးလင်းမြို့နယ်တို့၌ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် နေရာအချို့တွင် ရေကြီးမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ရှမ်းပြည်နယ် မိုင်းယန်းမြို့နယ်တွင် သြဂုတ် ၂၅ရက် ည ၁၀နာရီမှ ည ၁၂နာရီအထိ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် မိုင်းလွေရွာအနီး နမ့်ဟိုတွဲချောင်း ရေလျှံကာ မိုင်းယန်း- မိုင်းခတ်သွား ကားလမ်းပေါ်သို့ သုံးပေအထိ ရေကျော်ခဲ့ပြီး မိုင်းယန်းမြို့ ကောင်းမွန် ရပ်ကွက်၊ ၀မ်ပိန်းရပ်ကွက်နှင့် မိုင်းလွေရွာတို့မှ လူနေအိမ်လေးလုံး ပြိုကျပျက်စီးခဲ့ကြောင်း၊ထို့အတူ မွန်ပြည်နယ်ဘီးလင်းမြို့နယ်၌ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် သဲဖြူချောင်းရေ တိုက်စားရာမှ သြဂုတ် ၂၈ရက် ည ၁၀နာရီခန့်တွင် ကဇိုင်း-ညောင်ထောက်-သဲဖြူလမ်းပေါ် မိုင်တိုင်အမှတ် ၇၅နှင့် ၇၆ကြားရှိ သံပေါက်ဘေလီတံတားတစ်စင်း၏ တိုင်တစ်တိုင်နှင့် ရက်မတစ်ချောင်း မျောပါသွားခဲ့ပြီး ကြမ်းခင်း တစ်ပေခန့် နိမ့်ဆင်းသွားခဲ့ကြောင်း၊ကို၂၀၁၀ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁ရက်နေ့ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
အနောက်တိုင်းဆေးရောနှောပြီး မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသော တိုင်းရင်းဆေးဝါးအမည်များ ထုတ်ပြန်ကြေညာ
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် အရည်အသွေးစစ်မှန်ကောင်းမွန်ပြီး ဘေးဥပဒ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းသော အကျိုးအာနိသင်ရှိသော တိုင်းရင်းဆေးဝါးများကို အများပြည်သူတို့ သုံးစွဲရန် စဉ်ဆက်မပြတ် စနစ်တကျ စစ်ဆေးလျက်ရှိပါသည်။ ယင်းသို့ စစ်ဆေးရာတွင် ဈေးကွက်အတွင်း ရောင်းချလျက်ရှိသော တိုင်းရင်းဆေးဝန်းများသည် တိုင်းရင်းဆေးဝါးမှတ်ပုံတင်ထားခြင်း မရှိသည့်အပြင် ဘေးဥပဒ်ဖြစ်စေသော အနောက်တိုင်းဆေးဝါး ရောနှောထားသည့် တိုင်းရင်းဆေးဝါးများဖြစ်၍ စစ်မှန်အစွမ်းထက်မှုကို အာမခံချက်မပေးနိုင်သည့် ဆေးဝါးများဖြစ်ကြောင်း အများပြည်သူ သုံးစွဲရန် မသင့်လျော်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။ ယင်းတိုင်းရင်းဆေးဝါးများမှာ- Top နားသန့်ဆေးရည် - ဆိုင်အမှတ်(၄၆/၄၈)၊ သဇင် (E) ရုံ၊ မြေညီထပ်၊ အဆင့်မြင့်ဈေးချို၊ မန္တလေး (မှတ်ပုံတင်မရှိ)၊ ဦးသိန်းထွန်း၊ လုပ်သားဆေးနီကျော်- အမှတ် (၇၁)၊ ပန်းဘဲတန်းရပ်၊ ဟင်္သာတမြို့(သက်တမ်းလွန်)၊ နှင်းဆီဖြူ သွားကိုက်သွားနာခံတွင်းသန့်ဆေး- အမှတ် (၇၈၆/ခ)၊ ဗညားဒလလမ်း၊ (၁၈)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့(မှတ်ပုံတင်မရှိ)၊ ဆရာဒေါင်း ပန်းနာရင်ကျပ်သောက်ဆေး- အမှတ်(၃၃)၊ ဇီဇ၀ါလမ်း၊ ရေကျော်၊ ရန်ကုန်မြို့(အနောက်တိုင်းဆေးဝါးရော)၊ ဆေးသုခ ပန်းနာရင်ကျပ်ပျောက်ဆေး- အမှတ် (၂၅) ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ ဖျာပုံမြို့(အနောက်တိုင်းဆေးဝါးရော)၊ ရွှေဂဲ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး- ရွှေပုဇွန်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေး အမှတ်(၂၈)၊ (၂၃)လမ်း၊ လသာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့(အနောက်တိုင်းဆေးဝါးရော၊ မှတ်ပုံတင်မရှိ)၊ ရောင်နီဝါ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး- လိပ်စာမပါ((အနောက်တိုင်းဆေးဝါးရော၊ မှတ်ပုံတင်မရှိ)၊ Tiger Head and Pain Killer (Power) အပူကျအကိုက်အခဲပျောက်ဆေး- လိပ်စာမပါ(အနောက်တိုင်းဆေးဝါးရော၊ မှတ်ပုံတင်မရှိ)၊ Pain Killer - လိပ်စာမပါ(အနောက်တိုင်းဆေးဝါးရော၊ မှတ်ပုံတင်မရှိ)၊ ၂ မိနစ် အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးမှုန့်- လိပ်စာမပါ(အနောက်တိုင်းဆေးဝါးရော၊ မှတ်ပုံတင်မရှိ)၊ မေတ္တာမွန် အကြောတက်လေးဖက်နာသောက်ဆေး- လိပ်စာမပါ(အနောက်တိုင်းဆေးဝါးရော၊ မှတ်ပုံတင်မရှိ)၊ ကျေးဇူးရှင် ပန်းနာရင်ကျပ်ပျောက်ဆေး- ကျေးဇူးရှင်ဆေးတိုက် ဖုန်း- ၀၁- ၂၂၁၆၀၂(အနောက်တိုင်းဆေးဝါးရော၊ မှတ်ပုံတင်မရှိ) တို့ဖြစ်သည်။ တိုင်းရင်းဆေးဝါးများ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးသည့် လုပ်ငန်းရှင်နှင့် ဆေးဝါးရောင်းချသည့် ဆေးဆိုင်များသည် တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသော အထက်ပါ စံမညီဆေးဝါးအား ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်း လုံးဝမပြုလုပ်ရန်နှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါက သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းက တည်ဆဲဥပဒေအရ ပြင်းထန်စွာအရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်း ၂၀၁၀ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၂ရက်နေ့ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုကြမည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်အဖွဲ့က ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်အဖွဲ့က စက်တင်ဘာလ ၁ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် ကျင်းပမည့် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုမည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ သိရှိနိုင်ရန် ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်သည်။ အဆိုပါကြေညာချက်တွင် တက္ကသိုလ်စာမေးပွဲဝင်ခွင့် လျှောက်လွှာပုံစံများကို မြန်မာနိုင်ငံ စာစစ်အဖွဲ့ရုံးတွင် ၂၀၁၀ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၆ရက်မှ စတင်၍ သတ်မှတ်ထားသောနှုန်းထားဖြင့် ရောင်းချပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စာမေးပွဲဝင်ခွင့် လျှောက်လွှာတင်သွင်းရာ၌ ဘာသာတွဲအမှတ်စဉ် (၁)၊ (၅)၊ (၆)၊ (၇)နှင့် (၈) များဖြင့် ဖြေဆိုမည့် သူများအတွက် အစိမ်းရောင် ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာနှင့် ကတ်ပြားပုံစံဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဘာသာတွဲ အမှတ်စဉ် (၂)၊ (၃)နှင့် (၄)များဖြင့် ဖြေဆိုမည့်သူများအတွက် ပန်းရောင် ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာနှင့် ကတ်ပြားပုံစံဖြင့်လည်းကောင်း တင်သွင်းရန် အရောင်နှစ်မျိုး ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားကြောင်း၊ ပြင်ပဖြေဆိုရန် လျှောက်လွှာတင်သွင်းသူများ၏ စာမေးပွဲဝင်ကြေးငွေကို သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးများတွင် စာမေးပွဲဝင်ကြေးအတွက် ကျသင့်ငွေသွင်း တံဆိပ်ခေါင်းများ ဝယ်ယူပြီး ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာ၏ လက်ဝဲဘက်ထိပ်ပိုင်းတွင်ကပ်၍ မိမိတို့ အမှန်တကယ်နေထိုင်သည့် မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးတွင် ၂၀၁၀ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၆ရက်မှ အောက်တိုဘာလ ၁၅ရက်အတွင်း တင်သွင်းကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းများ၊ ကျောင်းခွဲများနှင့် တွဲဖက်ကျောင်းများမှ ဖြေဆိုရန် လျှောက်လွှာတင်သွင်းမည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ စာမေးပွဲဝင်ကြေးအတွက် ကျောင်းအုပ်ကြီးများသည် စာမေးပွဲဝင်ကြေး ကျသင့်ငွေသွင်း တံဆိပ်ခေါင်းများ ဝယ်ယူပြီး လျှောက်လွှာတစ်စောင်ချင်းတွင် ကပ်၍ စုပေါင်းပြီး မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်အဖွဲ့ရုံးသို့ ၂၀၁၀ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်မှ အောက်တိုဘာလ ၂၉ရက်အတွင်း သတ်မှတ်ရက်အမီ တင်သွင်းကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သတ်မှတ်ထားသောရက်များအတွင်း အချိန်မီပေးပို့ခြင်း မရှိသူများသည် စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့် ရရှိကြမည် မဟုတ်ကြောင်းနှင့် စာဖြေသူများတင်သွင်းသည့် စာမေးပွဲဝင်ခွင်လျှောက်လွှာနှင့် ကတ်ပြားတွင် ဖော်ပြပါရှိသည့် ဘာသာတွဲမှအပ အခြားဘာသာတွဲသို့ ပြောင်းလဲဖြေဆိုခွင့်ပြုမည် မဟုတ်သဖြင့် မိမိဖြေဆိုမည့် ဘာသာတွဲအလိုက် ပုံစံများ မှန်ကန်မှုရှိ၊ မရှိ သေချာစွာ စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်စွာ ဖြည့်စွက်ပေးပို့ကြရန်ဖြစ်ကြောင်း သတိပြုစေလိုကြောင်း၊ လျှောက်လွှာပုံစံများနှင့် ငွေသွင်းတံဆိပ်ခေါင်းများကို ရန်ကုန်မြို့ လှိုင်မြို့နယ်ရှိ လှိုင်တက္ကသိုလ်နယ်မြေရှိ မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်အဖွဲ့ (ဇွဲကပင်ဆောင်) တွင် လာရောက်ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်း ၂၀၁၀ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂ရက်နေ့ထုတ် ကြေးမုံ သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
ပဲခူးမြစ်ရေ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ကျဆင်းလာပြီး စိုးရိမ်ရေမှတ်၏ အထက် ၂ စင်တီမီတာ၌ တည်ရှိနေ
ပဲခူးမြစ်ရေသည် စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့ တိုင်းထွာချက်များအရ ပဲခူးမြို့၏ စိုးရိမ်ရေမှတ်ကို ကျော်လွန်ရောက်ရှိနေရာမှ ပြန်လည် ကျဆင်းလာပြီး စိုးရိမ်ရေမှတ်၏ အထက်၌မူ တည်ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း မိုးလေ၀သနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ သတင်းရရှိပါသည်။
ပဲခူးမြစ်ရေသည် စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့ နေ့လယ် ၁၂ နာရီ မိနစ် ၃၀ အချိန် တိုင်းထွာချက်များ အရ ပဲခူးမြို့တွင် ၉၁၂ စင်တီမီတာ သို့ရောက်ရှိနေကြောင်း၊ ပဲခူးမြို့၏ စိုးရိမ်ရေမှတ်ဖြစ်သော ၉၁၀ စင်တီမီတာ၏အထက် ၂ စင်တီမီတာ ကျော်လွန်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း မိုးလေ၀သနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ သိရှိရသည်။
မြစ်ရေသည် သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၁ နာရီခွဲ အချိန် တိုင်းထွာချက်များအရ ပဲခူး မြို့တွင် ၉၂၅ စင်တီမီတာသို့ရောက် ရှိခဲ့ပြီး ပဲခူးမြို့၏ စိုးရိမ်ရေမှတ်ကို ၁၅ စင်တီမီတာ ကျော်လွန်ခဲ့ကာ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ကျဆင်းစ ပြုလာခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရှိရသည်။
သြဂုတ်လ ၂၉ ရက်နေ့ မြန်မာ စံတော်ချိန် ၁၁ နာရီခွဲအချိန် တိုင်း ထွာချက်များအရ ပဲခူးမြို့တွင် ၈၅၀ စင်တီမီတာသို့ စတင်ရောက်ရှိပြီး နောက် ၂၄ နာရီအတွင်း ပဲခူးမြို့၏ စိုးရိမ်ရေမှတ် ၉၁၀ စင်တီမီတာကို ကျော်လွန်ရောက်ရှိနိုင်ကြောင်း သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ပဲခူးမြို့တွင် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းမှ စတင်ကာ ပဲခူးမြစ်ရေ ဆက်တိုက် မြင့်တက်လာခဲ့ကာ သြဂုတ်လ ၃၀ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်း၌ မြစ်ရေအမှတ် ၉၀၀ စင်တီမီတာကို ကျော်လွန်ရောက်ရှိပြီး စိုးရိမ်ရေမှတ်ဝန်းကျင် သို့ ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း မြစ်ကြီးများဖြစ်သော ဧရာဝတီမြစ်၊ ချင်းတွင်းမြစ်တို့တွင် မြစ်ရေကြီးမှု များ ကြုံတွေ့ရခြင်းမရှိခဲ့ဘဲ မြစ်ငယ်များဖြစ်သော ဒုဋ္ဌ၀တီမြစ်၊ ပဲခူးမြစ် တို့တွင်သာ မြစ်ရေကြီးမှုများ ကြုံတွေ့ခဲ့ရကြောင်းကို eleven. ဂျာနယ် တွင် ဖော်ပြ ပါရှိသည်.။
လူ့အခွင့်အရေး မှတ်တမ်း ကွန်ယက်အဖွဲ့ ND – Burma က အစီရင်ခံစာ တရပ် ထုတ်ပြန်
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အကျင့်ပျက် ခြစားပြီး အတင်းအကြပ် အခွန်ကောက်ခံမှု တွေကြောင့် ကျေးလက်ဒေသမှာ အများစု နေထိုင်ကြတဲ့ ပြည်သူတွေ စားစရာမရှိဘဲ ဗိုက်မှောက်နေကြရပြီလို့ လူ့အခွင့်အရေး မှတ်တမ်း ကွန်ယက်အဖွဲ့ ND – Burma က အစီရင်ခံစာ တရပ် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာရဲ့အဓိက ထောက်ပြချက်ကတော့ ပြည်သူတွေကို ပုံစံအမျိုမျိုးနဲ့ အခွန်ကောက်ခံမှုတွေကြောင့် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံနေကြရတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
စနစ်တကျပုံစံမျိုးနဲ့ မဟုတ်ဘဲ အလှူခံ အသွင်မျိုး၊ ကားလမ်းမှာ ဂိတ်နဲ့တားပြီး ငွေကောက်တာမျိုး၊ အဓမ္မလုပ်အားပေး ခိုင်းစေတာနဲ့ မြေယာ သိမ်းယူတာမျိုးတွဟော တကယ်တော့ ပြည်သူရဲ့ ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကို အာဏာပိုင်တွေဆီလွှဲပြောင်း ပေးနေရတာဖြစ်ပြီး၊ ဒေသခံအာဏာပိုင် အဆင့်က အဲဒီလိုလုပ်ုဖို့အတွက် အစိုးရက ခွင့်ပြုထားတယ်လို့ အစီရင်ခံစာကဆိုပါတယ်။
ဒီအစီရင်ခံစာမှာ အခွန်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့အစိုးရဌာနတွရေဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ကိုအဓိက ဖော်ပြထားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေ အကြောင်း ဦးတည်ပြီး ပြောထားတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ အစီရင်ခံစာ ဖြစ်မြောက်ရေး အတွက် အဓိကပါဝင်သူတဦးဖြစ်တဲ့ မချယ်ရီဇာဟောင်းက ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခွန်ကောက်ခံမှုစံနစ်မှာ အဓိကပြဿနာက အစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းက သိပ်ကြီးနေ ပြီးစစ်သားတွေသိပ်များနေပါတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့ကို ဗဟိုအစိုးရက လုံလောက်တဲ့ ထောက်ပံ့မှုတွေမပေးတဲ့အတွက် လက်နက်ရှိတဲ့စစ်သားတွေက သာမန်ပြည်သူတွေဆီက ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကို ရယူနေကြပါ တယ်။ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ပါဝင်နေတဲ့ ဒီလုပ်ရပ်တွေကြောင့် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေလည်း ဖြစ် ပေါ်စေပါတယ်လို့ အစီရင်ခံစာကိုရေးတဲ့ ဒေါက်တာ အယ်လစ်ဆန် ဗစ်ကာရီက ပြောသွားပါတယ်။
ပြည်သူတွေအနေနဲ့ အာဏာပိုင်တွေကို ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လောက်ပေးရမယ် ဆိုတာကိုလဲ မသိနိုင်ဘဲ အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံကလိုအပ်တဲ့အချိန် အိမ်တံခါး လာခေါက်ပြီး တောင်းနေတဲ့ အခြေအနေမျိုး ဖြစ်နေတယ်လို့လဲသူက ဆိုပါတယ်။
ဒါကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက် အဖြေတခုက ကုန်ကျစားရိတ်တွေ သိပ်များပြီး လူတွေကိုဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်စေတဲ့ တပ်မတော်ရဲ့အင်အား ကိုလျှော့ချဖို့ဖြစ်တယ်လို့ ဒေါက်တာဗစ်ကာရီက ဆိုပါတယ်။
ဆင်းရဲနေတဲ့ပြည်သူတွကေိုအခွန် ကောက်နေတာတွေရပ်လိုက်ပြီး ထိုင်းနဲ့တရုတ်ကို ရောင်းနေတဲ့ငွေကိုသုံးမယ်ဆိုရင် အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါတယ်လို့ ဒေါက်တာအယ်လစ်ဆန် ဗစ်ကာရီက ပြောခဲ့ပါတယ်။
Press Release - ND-Burma Arbitrary Taxation Report on 1st Sept 2010
ဆုရတာက နအဖ ဘက်တော်သားများ ပါးစပ်အပြောနဲ့ကယ်ဆယ်နေတာ ကာကွယ်နေတာက သိန်းစိန်တို့ ၊တကယ်ဘေးအန္တရာယ်ကြုံလို့အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတာ ပြည်သူတွေ၊
နအဖက ပြောတော့ အမျိုသားသဘာဝဘေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ဗဟိုကော်မီတီကို ၂၀၀၅ ခုနှစ်ကတည်းက ဖွဲ့ စည်းထားခဲ့တာဆိုပါလား။
နာဂစ်မုန်တိုင်းဘေးကြုံတော့ နာဂစ်မုန်တိုင်းတိုက်နေချိန် ဘယ် နအဖမှ ဘယ် အမျိုသားသဘာဝဘေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ ဝင်တွေမှ စွန့် စွန့် စားစား ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ဖို့မပြောနဲ့နာဂစ်မုန်တိုင်းတိုက်ပြီး နောက်နေ့ ရက်တွေမှာတောင် လမ်းပေါ်မှ မမြင်ခဲ့ရဖူး။ တကယ်တမ်း ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ခဲ့ကြရတာ ရဟန်းသံဃာတွေနဲ့ပြည်သူတွေအချင်းချင်းပါဘဲ။
ရက်အတော်ကြာမှ နိုင်ငံတကာ ကူညီမှု ဒေါ်လာငွေ ရနိုင်မှန်း ပွပေါက်ဆိုပြီး သေသွားကြတဲ့ ပြည်သူတွေ မျက်နှာမှ မထောက် သူတောင်းစားတောင်းသလို တောင်းခဲ့ကြတဲ့ နအဖတွေ လက်ပါးစေတွေ အလျှိုလျှို အသီးသီး ပေါ်လာခဲ့လိုက်ကြတာ။ ကုလသမဂ္ဂက လှူတဲ့ အလှူပစ္စည်းတွေအပေါ်မှာတောင် ဗိုလ်ချူပ်တွေက လှူတဲ့ပုံစံ နာမည်ပေါ်တင်တပ်တာ မရှက်ကြတော့ဖူး။ နအဖလက်ပါးစေ အဆင့်ဆင့်ကလည်း ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာက နာဂစ်မုန်တိုင်းဘေးသင့် ဒုက္ခသည်ပြည်သူတွေအတွက် လှူတဲ့ပစ္စည်းတွေကို ဖြတ်ပြီး ဘုံးလိုက်ကြ ရောင်းစားလိုက်ကြတာ လူကြားလို့ တောင် မကောင်းဖူး။
နအဖနဲ့ အတူ တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို မောင်ပိုင်စီး နိုင်ငံရဲ့မြေပေါ်မြေအောက် သယံဇာတပစ္စည်းတွေကို ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းလိုသဘောထားပြီး ရောင်းစားနေကြတဲ့ တေဇတို့ဌေးမြင့်တို့ လို သူခိုးကြီးတွေကို အခုတော့ နအဖ သိန်းစိန်က နာဂစ်မုန်တိုင်းအတွက် ကူညီခဲ့လို့ဆုတွေ ပေးသတဲ့ဗျာ။
နအဖက အမျိုသားသဘာဝဘေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ ကြီးနဲ့ရူးကြောင် မူးကြောင် မျက်နှာပြောင် သိန်းစိန်ရေ အခု ပဲခူးမြို့ မှာ ရေကြီးတာ နအဖ အမျိုသားသဘာဝဘေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကော်မီတီအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ မိုးရာသီဆိုရင် နှစ်စဉ် မြစ်ရေချောင်းရေတွေလျှံပြီး မြစ်ရေချောင်းရေကြီးကြတာ သိသိကြီးနဲ့ချောင်းကမ်းပါးတွေ မြစ်ကမ်းပါးတွေ ဘယ်တုန်းကများ ပြုပြင်ပေးတာ ရေတိုက်စားမှုဒဏ် ရေကြီးမှုဒဏ်ကာကွယ်ပေးတာ ရေလွဲတွေ ဖောက်လုပ်ပေးတာများ ရှိပါသလည်း။
နောက်ဆုံးကြတော့ ပါးစပ်အပြောနဲ့ကယ်ဆယ်နေတာ ကာကွယ်နေတာက သိန်းစိန်တို့ ၊ တကယ်ဘေးအန္တရာယ်ကြုံလို့အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတာ ရင်ဆိုင်နေကြရတာက ပြည်သူတွေ၊ ကြားထဲက မျက်နှာရ ဆုရတာက နအဖ ဘက်တော်သားများ ဖြစ်တာမို့မြန်မာပြည်ကြီးမှာ သဘ၀ဘေးအန္တရာယ်တွေ တွေ့ ကြုံရမှာ ရင်လေးလွန်းလို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားများ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များမှ ကင်းဝေးကြပါစေလို့ဆုတောင်းနေရပါတော့တယ်။
့ပေးပို့ ပေးသော ကိုနစ်နေမန်း အားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.။
ဗိုလ်မောင်အေး၊ ဗိုလ်ဌေးဦး နဲ့ အသစ် ကလေးများ....
ဒုဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမောင်အေးက ယခင် ရာထူးများအတိုင်း ဆက်လက် ရှိနေသည်လို့ ပြောလိုက်တာကတော့ ဒီကနေ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတို့ လူစာရင်းစာ - အဲ - သတင်းစာ ကြော်ငြာမှာပါ။ ဟုတ်ကဲ့ - စာမျက်နှာ ၁မှာ မျက်နှာဖုံးမှာပါ။ သ၀ဏ်လွှာပေးပို့ ဘာညာကွိကွ ကြော်ငြာမှာပေါ့။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်း သတင်းတွေက တက်လာတယ် မဟုတ်လား၊ မောင်အေးကြီး ဘာဖြစ်သွားပြီ ညာဖြစ်သွားပြီလို့ ဆိုကြတယ်လေ၊ သူ့ကိုပဲ ပေါတာကြီးသန်းရွှေက နားရင်းရိုက်လိုက်သလို၊ အရက်နာကျလို့ မောနင်းပက် မော့ရတာတွေက နေ့စဉ်ဖြစ်နေတာကြောင့် လူမြင်ကွင်း မထွက်နိုင်သလို - လိုလို သတင်းတွေချည်း ဖတ်နေရရာကနေ အခုလို မျက်နှာဖုံးမှာ အယောင်ပြ ပါလာတာကို မြင်လိုက်ရတာပါပဲ။
“ခင်ဗျားတို့မဲတွေ အကုန်လုံး ကျုပ်တို့ရမှာနော်” လို့ ပြောနေသလား...
လယ်ဆည် ၀န်ကြီး ဦးဌေးဦးက လူထုကြားထဲ ၀င်ပြီဗျ။ ဒီကနေ့ ကြေးမုံမှာ ဒီကျေးဇူးရှင်ကို အခုလို တွေ့ရပါတယ်။ မဲဆွယ်တယ်လို့ ဝေဖန်ခံရတော့မှာပဲ။ တကယ်တော့ ဆွယ်ဖို့ လိုသေးသလားဗျာ။ နာဂစ် အခြေခံဥပဒေအရ ဖြစ်လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲပြီးရင် သူတို့ပဲ လွှတ်တော်တက်ကြမယ် မဟုတ်လား။ အေးရာအေးကြောင်း နေစမ်းပါ ကျေးဇူးရှင်ရယ်။
တိုင်းမှူးသစ် ဗိုလ်မှူးချုပ်ထွန်းသန်းကို သတင်းစာမှာ ဒုအကြိမ် ပွဲထုတ်ပြန်ပါပြီ။ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက လုပ်တဲ့ အောင်ချက်ကောင်းကျောင်းဂုဏ်ပြုပွဲ သွားတက်တဲ့အကြောင်း ရေးထားတဲ့ သတင်းမှာပါ။
တိုင်းမှူးရဲ့ အလုပ်ဆိုတာ အခမ်းအနားတွေ လိုက်တက်ရတာမှန်း သိကြရအောင် သတင်းထည့်တာလား၊ တိုင်းမှူး အသစ်ကလေးကို စာဖတ်သူရှေ့ ချပြချင်တာလား၊ စစ်ဗိုလ်တွေ အကုန်လုပ်နိုင်တယ်လို့ လျှောက်ပြောချင်တာလား တခုခုတော့ တခုခုပဲ။
ဒီသတင်းကတော့ တပ်မမှူးရဲ့ သတင်းပါပဲ။ သူ့ပုံက ဒီသတင်းမှာ ၂ ပုံတောင် ပါသဗျ။ ပွဲက သူ့ပွဲဖြစ်တယ်၊ ပွဲမှာ သူ ဘာလုပ်တယ် စသဖြင့်ရေးထားတယ်။ သို့သော်လည်း သူ့နာမည်တော့ မထည့်ထားဘူး။ ဒါလည်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတို့ သတင်းစာ စတိုင်ပဲ ထင်ပါရဲ့။ SPDC journalism မြန်မာလို ပြောရရင် နအဖစာနယ်ဇင်းအရေးအသားပေါ့ဗျာ။
ဒီလူကြီးက မော်ဒယ်ဂဲ မဟုတ်ပေမယ့်လည်း နာမည်ဘယ်လို ဆိုတာတော့ အသိချင်သား။ အဲဒီဒေသက တပ်ရင်းမှူး ၁၀ ယောက်လောက်ကို ဆွဲစိထားတယ် ဆိုသကိုးဗျ။ ကဲ - ဒီတခေါက်တော့ ဒီလောက်ပါပဲ။
ယခု မိုးမခ သတင်းအား ပေးပို့ ပေးသော ကိုမောင်ရစ် ( မိုးမခ ) အားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Thursday, September 02, 2010 Links to this post
မြန်မာအမျိုးသမီးငယ်များအနေဖြင့်ခေတ်လွန်ကဲသည့် သရုပ်ပျက်ဝတ်စားခြင်းများသည်ဆိုက်ဘာပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအတွက် ပစ်မှတ်အလွယ်တကူထားရာသားကောင်သဖွယ်ဖြစ်ကြောင်း
ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဈေးဝယ်စင်တာ၊ အင်တာနက်ဆိုင်နှင့် အများပြည်သူ စိတ်လက်အပန်းဖြေရာ နေရာအချို့တွင် လုံခြုံရေးအရ တပ်ဆင်အသုံးပြုထားသော စီစီတီဗီ ကင်မရာများကို အလွဲသုံးကာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထိပါးမှုများ ပြုလုပ်လာကြကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ခံ လူငယ်ထုနှင့် ကိုယ်တွေ့ကြုံတွေ့ ခဲ့သူများ၏ ပြန်လည် ပြောကြားချက်များအရ သိရှိရပါသည်။
ရန်ကုန်မြို့နေ လူထုအများစု၏ စိတ်လက်အပန်းဖြေရာ ပန်းခြံ၊ ဆိုက်ဘာကဖေးများနှင့် ရှော့ပင်းစင်တာများရှိ ဈေးဝယ်ထွက်သူများ၏ အ၀တ်လဲခန်းများတွင်ပါ အများပြည်သူမြင်သာမှုမရှိသည့် စီစီတီဗီများကို တပ်ဆင်ကာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ထိပါးနှောင့်ယှက်ခြင်းများ ပြုလုပ်လာခဲ့သည် ကို တွေ့မြင်နေရကြောင်း မြို့ခံလူငယ်တစ်ဦးက ပြောပြခဲ့သည်။ ယင်းဖြစ်ရပ်များကို အင်တာနက်အား ပုံမှန်သုံးစွဲမှုပြုနေသော လူငယ်များကြားတွင်လည်း တွေ့မြင်နေရတတ်ပြီး ယခုအခါ ဆိုက်ဘာကဖေးများတွင်ပါ လုံခြုံရေးကင်မရာ တပ်ဆင်ထားကာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထိခိုက်စေသည့် ကျူးလွန်ခြင်းများရှိလာကြောင်း ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ် တက်ရောက်နေသော ကျောင်းသားတစ်ဦးက ၎င်းတွေ့ကြုံခဲ့ရသည်ကို ပြန် လည် ပြောပြခဲ့သည်။
အမျိုးသမီးငယ်များ အနေဖြင့် ခေတ်လွန်ကဲသည့် သရုပ်ပျက်ဝတ် စားဆင်ယင်ခြင်းများသည် ဆိုက်ဘာပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအတွက် ပစ်မှတ် အလွယ်တကူထားရာ သားကောင်သဖွယ် ဖြစ်သွားနိုင်ကြောင်း . "ကျွန်တော်တို့ လူငယ်အသိုင်း အ၀ိုင်းမှာ ဒီဖြစ်စဉ်အသစ်တွေကို ကြားသိနေရတာ အမြဲပဲ။ အရင်က ရှော့ပင်းစင်တာ အ၀တ်လဲခန်းတွေမှာ လုံခြုံရေးကင်မရာခိုးတပ်ပြီး ၀က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်လို့ ပြဿနာတွေရှိခဲ့ကြသလို အခုဆိုက်ဘာကဖေးတွေ မှာလည်း ဒီပြဿနာတွေ ဖြစ်လာတာ အွန်လိုင်းပေါ်တောင် ရောက်နေ ပြီ"ဟု ၎င်းက ပြောပြခဲ့သည်။
ဆိုက်ဘာကဖေးများ၌ ကင်မရာများ တပ်ဆင်ကာပုဂ္ဂိုလ်ရေးထိပါး နှောင့်ယှက်မှု ပြုလုပ်ကြသည်ဟုဆိုရာ တွင် မိမိတို့ဆိုင်သို့ လာရောက်ကြသော အသုံးပြုသူများအား သတ်မှတ် ထိုင်ခုံတွင် ထိုင်စေပြီး ခုံ၏အောက်ခြေ၌ ကင်မရာတပ်ဆင်ဖမ်းယူထားသည့် ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများ ၀က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်၌ တွေ့မြင်လာရကြောင်း အင်တာနက်ပုံမှန် အသုံးပြုသူလူငယ်တစ်ဦးက ပြောပြခဲ့ပါသည်။ "အွန်လိုင်းအပေါ်မှာ အခုလက်ရှိဖြစ်နေတာက အင်တာနက်ဆိုင် တချို့မှာ စကတ်တိုဝတ်ထားတဲ့ အမျိုးသမီးတွေလာရင် ကင်မရာခိုးတပ်ထားတဲ့သီးသန့်ခုံမှာ ထိုင်ခိုင်းတယ်။ သူတို့ ထသွားရင် ဗီဒီယိုဖိုင်ကူးပြီး ဆိုင်က လူတွေကြည့်ရုံသာမက ၀က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ထိ တင်ကြတယ်။ ဒါက ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလုံးဝ ထိပါးတယ်လို့ထင်ပါတယ်" ဟု ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ်မှ ဥပဒေကျောင်းသားတစ်ဦးက ပြော ပြခဲ့သည်။
လူငယ်အများစုအနေဖြင့်လည်း အများပြည်သူများ မြင်သာရာနေရာများသို့ သွားလာရာ၌ ခေတ်နှင့်လျော်ညီစေရုံသာ ၀တ်စားဆင်ယင်သင့်ပြီး ခေတ်မလွန်စေရန် သတိပြုဆင်ခြင်သင့်ကြောင်း ပစ္ဆိမာရုံပညာ ဒါနသင်တန်းမှ ကျောင်းဆရာတစ်ဦးက ပြောပြခဲ့သည်။ ရှော့ပင်းစင်တာများရှိ အ၀တ်လဲခန်းအချို့တွင်လည်း လုံခြုံရေး ကင်မရာများ အလွဲသုံးစွဲခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်အချို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် များစွာသတိပြု ဆင်ခြင်လာရကြောင်း သိရှိရပါသည်။
"အခုဆိုရင် ရှော့ပင်းစင်တာတွေမှာ အ၀တ်အစားဝယ်ဖို့ စမ်းဝတ်ကြည့်ရင်တောင် အ၀တ်လဲခန်း ၀င်ရမှာကြောက်တယ်။ ၀င်ရင်လည်း ကင်မရာ ရှိ၊ မရှိ သတိထားပြီး ကြည့်လာရတယ်"ဟု ရှော့ပင်းစင်တာတစ် ခုတွင် ပုံမှန်ဈေးဝယ်လေ့ရှိသူ လူငယ် မိန်းကလေးတစ်ဦးက ပြောပြခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးငယ်များ အနေဖြင့် ခေတ်လွန်ကဲသည့် သရုပ်ပျက်ဝတ် စားဆင်ယင်ခြင်းများသည် ဆိုက်ဘာပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအတွက် ပစ်မှတ် အလွယ်တကူထားရာ သားကောင်သဖွယ် ဖြစ်သွားနိုင်ကြောင်း အင်တာနက် နည်းပညာဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ တစ်ဦးက သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။ "၀က်ဆိုက်ပေါ် ရောက်နေတဲ့ cyber abuses တွေကို ကြည့်ရင် လုံးဝမမျှော်လင့်ထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေချည်းပဲ။
လူငယ်တွေအနေနဲ့ ဒါကို သတိပြုဆင်ခြင်သင့်သလို ကိုယ့်ရဲ့ဝန်းကျင်မှာလည်း ဒါမျိုးမဖြစ်အောင် နေထိုင်သင့်တယ်"ဟု လူငယ်ရေးရာ ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးက အကြံပြုပြောကြားခဲ့ကြောင်းeleven ဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။
မြန်မာပြည်ထဲက မှောက်မိုက် နေရသည့် ဘဝများ
မြန်မာစစ်အစိုးရက ပြည်သူတွေကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ အခွန်တွေ အတင်းအကျပ် ကောက်ခံနေလို့ မြန်မာပြည်သူတွေ ဆင်းရဲတွင်း ပိုမို နက်ရှိုင်းလာရတဲ့အကြောင်း အစီရင်ခံစာတစောင်ကို ထိုင်းအခြေစိုက် လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ တခုက ဒီနေ့ ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ အခွန်စနစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူတွေ နားလည်အောင် အစိုးရက ရှင်းမပြဘဲ ငွေညှစ်သလို အခွန်ကောက်ခံမှုတွေဟာ မြန်မာပြည်သူတွေအပေါ် စနစ်တကျ ကျူးလွန်နေတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေပဲလို့ ဆိုပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ကိုကျော်အောင်လွင်က ဘန်ကောက်မြို့မှာ ဒီကနေ့ ကျင်းပတဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲကို တက်ရောက်ပြီး သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
ဗိုက်မှောက်နေရတဲ့ ဘ၀များလို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားတဲ့ အစီရင်ခံစာထဲမှာ မြန်မာအာဏာပိုင်တွေရဲ့ အတင်းအကျပ် အခွန်ကောက်မှု မျိုးစုံကို ထောက်ပြထားပြီး ဒါတွေဟာ ပြည်သူတွေဆီကနေ မတရားသဖြင့် ငွေညှစ်နေတာတွေ ဖြစ်တယ်၊ ပြည်သူတွေဟာ စီးပွားရေး ကျပ်တည်းမှုတွေ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကြားက အခွန်တွေကို မဖြစ်ဖြစ်အောင် ပေးဆောင်နေကြရတယ်၊ ဒီလို အခြေအနေတွေဟာ နေ့စဉ် လစဉ် ကြုံတွေ့နေကြရတာတွေဖြစ်လို့ ဆင်းရဲတဲ့ဘ၀က ရုန်းမထွက်နိုင်အောင် ဖြစ်နေကြရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီအစီရင်ခံစာကို သြစတြေးလျနိုင်ငံ မက်ကွိုင်းယား တက္ကသိုလ် မြန်မာ့စီးပွားရေး စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအဖွဲ့က ဒေါက်တာ အယ်လ်လီဆင် ဗစ်ကရေး (Dr. Alison Vicary) က အဓိက သုတေသနလုပ်ပြီး ရေးသားတာပါ။
“ပြည်သူတွေဟာ သူတို့ အခွန်ဘယ်လောက် ပေးရမယ် ဆိုတာကို မသိကြဘူး။ ဘယ်အချိန်မှာ ပေးရမယ် ဆိုတာကိုလည်း မသိကြဘူး။ ဒါဟာ တကယ့် အရေးတကြီး ပြဿနာပါ။ အခွန်ပေးဆောင်ရမယ့် လူတိုင်းက ဘယ်အချိန်မှာ အခွန်ဘယ်လောက် ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို မပေးခင်က ကြိုပြီး သိရမှာပါ။ အဲဒါမှလည်း သူတို့ အခွန်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် ကြိုပြီး စီစဉ်နိုင်ကြမှာပါ။ စိုက်ပျိုးရေးကို အခြေခံတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီပြဿနာက တော်တော် ဒုက္ခပေးပါတယ်။ ပြည်သူအများစုဟာ ဘဏ်တွေမှာ ငွေစုစာရင်း ဖွင့်ထားနိုင်ကြတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။” လို့ ဒေါက်တာ အယ်လ်လီဆင်က ပြောသွားခဲ့တာပါ။
စာမျက်နှာ ၁၀၀ ကျော်ပါတဲ့ အခု အစီရင်ခံစာကို ထိုင်းနိုင်ငံ အခြေစိုက် လူ့အခွင့်အရေး မှတ်တမ်းကွန်ယက် မြန်မာနိုင်ငံ (ND Burma) အဖွဲ့က ထုတ်ပြန်တာပါ။ ဒီအဖွဲ့ဟာ ထိုင်းအခြေစိုက် မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ ၁၃ ခုနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီး မြန်မာပြည်တွင်းက မတရား အခွန်ကောက်ခံနေရတဲ့ လူတွေကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုတွေ၊ အခွန်ပေးရတဲ့ သက်သေ အထောက်အထားတွေနဲ့ အစီရင်ခံစာကို တင်ပြထားတာပါ။ ND Burma အဖွဲ့က တာဝန်ခံတဦးဖြစ်သူ မချယ်ရီဇာဟောင်က မတရား အခွန်ကောက်မှုနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု ဆက်စပ်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“လူတယောက်ယောက်က သူတို့ကို အခွန်လာကောက်ရင် ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ သိရမယ်။ ဘယ်မှာ ဒီအခွန်တွေ သွားမလဲဆိုတာ သိရမယ်။ အဲဒီအခွင့်အရေးဟာ ပြည်သူလူထုတွေက ချိုးဖောက်ခံနေရတယ်။ ပြည်သူလူထုတွေက သူတို့ပိုင်တဲ့ မြေတွေကို အလကား ပေးလိုက်ရတယ်၊ လာသိမ်းခံနေရတယ်။ အဲဒါတွေဟာဆိုရင် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု တခုလည်း ဖြစ်နေတယ်။ အတင်းအဓမ္မ လုပ်အားပေး ခိုင်းစေမှုဟာလည်း အခွန်ကောက်မှုပါပဲ။”
အခွန်ကောက်နေကြတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာ အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေအပြင် အပစ်ရပ် အဖွဲ့တွေလည်း ပါဝင်နေတယ်လို့ ဒေါက်တာ အယ်လ်လီဆင်က ပြောပါတယ်။
“အခွန်တွေကို အများအပြား ကောက်ယူကြတာကတော့ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေပါပဲ။ စစ်အစိုးရ ဖြစ်ရင်ဖြစ်၊ မဟုတ်ရင် စစ်အစိုးရနဲ့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲထားတဲ့ အဖွဲ့တွေ၊ ဒါမှမဟုတ်ရင် စစ်အစိုးရက ကျောထောက်နောက်ခံ ပေးထားတဲ့ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့တွေကနေ ကောက်ခံနေတာပါ။ အခွန်ကို အချိန်မီ မပေးနိုင်ရင် အန္တရာယ် ကြုံရမယ့်သဘော ခြိမ်းခြောက်မှုတွေလည်း ရှိသလို မပေးရင် အကြမ်းပတမ်း ဆက်ဆံခံရတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒီလို အခြေအနေတွေကြောင့် မြန်မာပြည်သူတွေဟာ အခွန်မျိုးစုံကို ကြောက်ကြောက်နဲ့ ပေးနေကြရတယ်။” လို့ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
ND Burma အဖွဲ့ရဲ့ တာဝန်ခံတဦးဖြစ်တဲ့ ကိုဟန်ကြီးကလည်း မဖြစ် ဖြစ်အောင် အခွန်ပေးဆောင်ရလို့ မြန်မာပြည်သူတွေဘ၀ ကျပ်သထက် ကျပ်လာတဲ့ အကြောင်းကိုလည်း ရှင်းပြပါတယ်။
“အိမ်တိုင်း၊ အိမ်ထောင်စုတိုင်းဟာ အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်း အဆင့်ဆင့်ကို အမြဲတစေ ပေးနေရတဲ့ အခါကြတော့ လူထုမှာ ပထမ သူတို့တောင်းသမျှ ပေးဖို့အတွက်ကို သူတို့ရှိတဲ့ဝင်ငွေ၊ နောက်တော့ ပိုင်ဆိုင်မှု အဲဒါတွေနဲ့ ဖြည့်ဆည်းပြီး ပေးရတယ်။ တကယ်လို့ မပေးနိုင်တဲ့အခါမှာ ရှိသမျှ သူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ ရောင်းချပြီး ပေးရတယ်။ မပေးနိုင်တဲ့အခါမှာ အတိုးကြီးကြီးပေးပြီး တခြားလူတွေဆီက ချေးပြီး ပေးရတာမျိုးတွေရှိတယ်။ မိသားစုဘ၀ရဲ့ စီးပွားရေးက အရမ်းကို ခက်ခဲလာတဲ့ အခါမှာ သူတို့မိသားစုဝင်တွေကို တခြား အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေကို လွှတ်ပြီးတော့ စီးပွားရှာခိုင်းရတဲ့ ပြဿနာမျိုးတွေအထိ ကြီးကြီးမားမား ပေါ်ပေါက်လာရတယ်။”
ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းဟာ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေနဲ့ ၀င်ခိုင်းထားတဲ့ သူတို့ရဲ့ အသင်းသားတွေဆီကနေ အသင်းကြေး ကောက်ယူတာတွေ၊ အသင်းရန်ပုံငွေ ရှာဖွေတယ်ဆိုပြီး ပြက္ခဒိန်၊ ဦးထုပ် စတဲ့ပစ္စည်းတွေကို ရောင်းချနေလို့ အသင်းဝင် မဟုတ်တဲ့ သူတွေကလည်း မ၀ယ်ချင်ပေမဲ့ ၀ယ်နေရတာတွေ၊ ဒီလို ကောက်ခံလို့ရတဲ့ ငွေတွေကို ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေး အသင်းကနေ နိုင်ငံရေးပါတီကို အသွင်ပြောင်းပြီး ရွေးကောက်ပွဲမှာ အောင်နိုင်ရေး လုပ်နေတယ်လို့ ယူဆနိုင်တဲ့အကြောင်း၊ တိုင်းရင်းသား ဒေသတွေမှာ မြန်မာစစ်တပ်က သူတို့လိုရင် လိုသလို ဒေသခံတွေရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို အတင်း ရယူနေတာတွေဟာ ကြမ်းတမ်းတဲ့ အခွန်ကောက်ယူမှုတွေ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း၊ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ အဓမ္မ အခွန်ကောက်မှုတွေကြောင့် အဓိက ထိခိုက်နစ်နာရတာဟာ ဆင်းရဲတဲ့ ပြည်သူတွေပဲ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း၊ ဒီလိုစနစ်နဲ့သာ ဆက်သွားနေမယ်ဆိုရင် မြန်မာပြည်သူတွေ ဆင်းရဲတွင်းက ထွက်နိုင်မှာ မဟုတ်လို့ ဒီ အခွန်ကောက်ယူတဲ့ စနစ်ကို ပြောင်းလဲရေး မြန်မာစစ်အစိုးရကို ဖိအားဝိုင်းပေးဖို့ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေနဲ့ အာဆီယံအသင်း အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းကိုပါ တိုက်တွန်းထားတယ်လို့ အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်တဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
တာချီလိတ် အာဏာပိုင်များ၏ နိုင့်ထက်စီနင်း ပြုမှုအား တိုင်ကြားခြင်း
ပေးပို့ လာသော မနန်းသီတာအေး အားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.။
အနုပညာသမားများ … ပွေ့ဖက်ထား နှင့် ပင်အိုရွက်နုသင်တန်း
အနုပညာသမားများ … ပွေ့ဖက်ထား
၁.၉.၂၀၁၀ (ဗုဒ္ဓဟူး)နေ့ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ ပင်အိုရွက်နု ပန်းချီသင်တန်း အပြီး ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရွှေဂုံတိုင်လမ်းရှိ အဓိပတိ ပန်းချီပြခန်းတွင်3Artist’s Show အမည်ဖြင့် ဒါရိုက်တာ၊ စာရေးဆရာ၊ ပန်းချီ ဦးမိုးသူ၊ ကဗျာဆရာ ပန်းချီ ကိုစောဝေနှင့် ကိုစောဝေ၏ သမီး Ewi တို့ ရေးဆွဲထားသည့် ပန်းချီလက်ရာ ကားချပ်များအား နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ဥက္ကဌ ဦးကျော်သူ၊ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်သန်းမြင့်အောင်၊ ဘဏ္ဍာရေးမှူး ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်ဖေ (ခ) ဒေါ်ရွှေဇီးကွက် တို့နှင့်အတူ ပန်းချီဆရာ ဦးဝင်းကြည်၊ ပန်းချီဆရာ ဦးလှထွန်းအောင်တို့သည်3Artist’s Show ပန်းချီပြပွဲ ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ သွားရောက်အားပေး လေ့လာ ကြည့်ရှုကြသည်။
ကဗျာဆရာ ပန်းချီ ကိုစောဝေက တယောအဖွဲ့နှင့် တွဲဖက်ကာ “ပွေ့ဖက်ထား” ဟူသော ကဗျာအား ရွတ်ဖတ်ကာ အခမ်းအနားကို ကျင်းပခဲ့သည်။ ယင်3းArtist’s Show ပြပွဲတွင် အနုပညာရှင်များစွာ လာရောက်အားပေး ချီးမြှင့်ခဲ့သလို ဦးကျော်သူနှင့် မဆုံတွေ့ရသည်မှာ ကြာပြီဖြစ်သော စာရေးဆရာကြီး ပါရဂူ၊ ဒေါ်ခင်ဆွေဦး၊ ဦးမိုးသူနှင့် ပန်းချီဆရာ မြိတ်-၀င်းထိန် တို့ကိုလည်း နွေးထွေးစွာဖြင့် တွေ့ဆုံခဲ့ရသည်။
ယင်း ပန်းချီပြပွဲ အခမ်းအနားဖွင့်ပွဲတွင် တက်ရောက်လာသော အနုပညာသည်များအား အဓိပတိ ထမင်းဆိုင်မှ ထမင်းဟင်းလျာဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံ ကျွေးမွေးမှုအရသာသည် အဓိပတိ ပန်းချီ ပြခန်းသို့ လာရောက်ကြသော အနုပညာသည် အချင်းချင်း နွေးထွေးစွာ ပွေ့ဖက်ထားသော အရသာ နှင့် ထပ်တူထပ်မျှ ခံစားခဲ့ရပါသည်။
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)သည် မျိုးဆက်သစ် ကလေးငယ်များအား ပန်းချီသင်တန်း ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးပြီးသည့်နောက် မျိုးဆက်သစ် ကလေးငယ်များ၏ ပန်းချီပညာရပ်များဖြင့် မိဘမဲ့ HIV ကလေးငယ်များအတွက် ရန်ပုံငွေရှာဖွေပေးရန်အတွက် မျိုးဆက်သစ်ကလေးငယ်များအား မိမိတို့ စိတ်ကြိုက် ရေးချယ်လိုသည့် ပုံရိပ်လွှာများအား စိတ်ကြိုက်ရေးချက်တို့ဖြင့် ကုသိုလ်ဖြစ် ရေးဆွဲကြရန် မှာကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့ ၁.၉.၂၀၁၀ (ဗုဒ္ဓဟူး) နေ့တွင် မျိုးဆက်သစ် ကလေးငယ်များ၏ ရေဆေးပန်းချီ လက်ရာများကို နှစ်သက်ကျေနပ်အားရ အားကျမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာသော လူလတ်ပိုင်း၊ လူကြီးပိုင်းတို့၏ တောင်းဆိုချက်ကြောင့် ပန်းချီသင်တန်း ၂/၂၀၁၀ ကို ထပ်မံဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
ယင်းသင်တန်းတွင် ပန်းချီဆရာကြီး ဦးဝင်းကြည်၊ ပန်းချီဆရာ ဦးလှထွန်းအောင်၊ ပန်းချီ ဆရာမ ဒေါ်နုနုတို့မှ မေတ္တာစေတနာဖြင့် လာရောက်သင်ကြားကြမည် ဖြစ်သည်။ ယနေ့ သင်တန်းတွင် ပန်းချီဆရာကြီး ဦးဝင်းကြည်၊ ပန်းချီဆရာ ဦးလှထွန်းအောင်တို့မှ ပန်းချီဆွဲခဲတံ အမျိုးအစားများ အကြောင်း၊ ခဲတံချွန်နည်း ပညာရပ်များအကြောင်း၊ လိုင်းရေးဆွဲနည်းများကို အသေးစိတ် သင်ကြားပြ သ သွားသည်။ ယင်းသင်တန်းအပြီးတွင် ပန်းချီဆရာ ဦးလှထွန်းအောင်တို့ အင်းစိန်အကျင်းထောင် တွင် ပန်းချီပညာရပ်ကို ၀ါသနာပါသော အကျင်းသားတို့အား သင်ကြားပြသနေသော သင်တန်း အတွက် လိုအပ်သော ပန်းချီပစ္စည်းများ ၀ယ်ယူရန် အလှူငွေ ၂၀၀၀၀၀/- ကျပ်ကို ဦးကျော်သူ + ဒေါ်ရွှေဇီးကွက်တို့မှ လှူဒါန်းပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
ယခု သင်ကြားပို့ချလျှက်ရှိသော ပန်းချီသင်တန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆရာမ ဒေါ်သန်းမြင့်အောင် (စာရေးဆရာမ)က “မိမိတို့အရွယ်သည် လူကြီးပိုင်းဖြစ်နေပြီ။ မိမိတို့တွင် အနုပညာနှင့် ပတ်သက်၍ နုပျိုဆဲ ဖြစ်နေကြောင်း … ဒါကြောင့် မိမိတို့အား ပင်အိုရွက်နုများ” ဟု ကွယ်လွန်သူ ပန်းချီဆရာ သန်းမြင့်အောင် ပြောကြားခဲ့သော စကားရပ်ကို သတိရမိကြောင်း ပြန်လည်အမှတ်ရ ပြောကြား ခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် ယခု လူကြီးပန်းချီ သင်တန်းအား “ပင်အိုရွက်နု” ပန်းချီသင်တန်းဟု တင်စားလိုက် ရပါသည်။
ဗဟိုကော်မတီ ကချင် အထူးဒေသ (၂)၊ ကေအိုင်အို ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်
ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်ကြေးမပေးသွင်းနိုင်၍ နိုင်ငံရေးပါတီများ၏တင်သွင်းနိုင်သည့်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အရေအတွက်မျှော်မှန်းသည်ထက်နည်းပါးခဲ့ရ
ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခွင့် မှတ်ပုံတင်ကြေး မပေးသွင်းနိုင်၍ နိုင်ငံရေးပါတီ များ၏ တင်သွင်းနိုင်သည့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အရေ အတွက် မျှော်မှန်းသည်ထက် နည်းပါးခဲ့ရ PDF Print E-mail
စနေနှင့် တနင်္ဂနွေ ရုံးပိတ်ရက်များတွင် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ အမည်စာရင်း တင်သွင်းခြင်းကို ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က သြဂုတ်လ ၂၆ ရက် ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
ယင်းကဲ့သို့ စနေနှင့် တနင်္ဂနွေနေ့များတွင် အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းကို ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည့်အပေါ် နိုင်ငံရေးပါတီများက ကြိုဆိုခဲ့ကြသော်လည်း မှတ်ပုံတင်ကြေးကျပ်ငါးသိန်း မပေးသွင်းနိုင်၍ နိုင်ငံရေးပါတီများ ၏တင်သွင်းနိုင်သည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အရေအတွက် မျှော်မှန်းသည်ထက် နည်းပါးခဲ့ရကြောင်း နိုင်ငံရေးပါတီများမှ တာဝန်ရှိသူများ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
"အခုလို စနေ၊ တနင်္ဂနွေ နှစ်ရက်တိုးရတဲ့အတွက် လုပ်သာကိုင်သာ ရှိသွားပေမယ့်လည်း မလုံလောက်ပါဘူး။ အမည်စာရင်း တင်သွင်းနိုင်မယ့်ရက်ကို ရက်ပေါင်း ၆၀ လောက် ပေးသင့်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်လောင်း အမည်စာရင်း တင်သွင်းနိုင်ဖို့အတွက် မကျပ်တော့ပါဘူး" ဟု ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးလွင် က သြဂုတ်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
"ရန်ကုန်တိုင်းမှာ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၄၅ ယောက် မျှော်မှန်းထားပေမယ့် အယောက် ၂၀ လောက်ပဲ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ ဖြစ်လာပါတယ်။ ပေးသွင်းရမယ့် ငွေကြေး မပြည့်လို့ အခုလိုလျော့သွားရတာပါ"ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(မြန်မာ) မှ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဒေါ်သန်းသန်းနုက "အခုလိုရက်တိုးသွားတဲ့အတွက် နည်းနည်းတော့ အချိန်ရတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ငွေမရှိတာက မရှိတာပဲလေ။ ငွေကြေးအခက် အခဲကြောင့် တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မယ့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အမည်စာရင်းတင်သွင်းဖို့ လျာထားတဲ့ ၁၀၀ ၀န်းကျင်ကနေ ၇၀ ၀န်းကျင်လောက်ပဲ လတ်တလော ကျန်တော့တယ်"ဟု သြဂုတ်လ ၂၇ ရက်နေ့က ပြောကြားခဲ့သည်။
မျှော်မှန်းထားသည့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးရေအတိုင်း အမည်စာရင်း တင်သွင်းနိုင်ခဲ့သည့် နိုင်ငံရေးပါတီအချို့လည်းရှိခဲ့ကြောင်း စုံစမ်းသိရသည်။"ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းဒေသကြီး ငါးခုမှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် လောင်း ၄၀ ကျော် ၀င်ရောက်ယှဉ် ပြိုင်ဖို့ မျှော်မှန်းထားပါတယ်။ မျှော်မှန်းထားတဲ့အတိုင်း အမည်စာရင်း တင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်"ဟု ကရင်ပြည်သူ့ ပါတီ၏ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးစောအေးကိုက ပြောကြားခဲ့သည်။
သို့ရာတွင် လာမည့်ရွေးကောက် ပွဲများ၌ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရမည့် လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်မှာ ၁၀၀၀ ကျော်ရှိရာ မဲဆန္ဒနယ်အားလုံးတွင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့် နိုင်ငံရေးပါတီမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး ငါးပါတီပင်မပြည့်ကြောင်း နိုင်ငံရေးလေ့လာ သုံးသပ်သူများက ဆိုပါသည်။ ထို့ပြင် မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်တွင် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံမည့် လွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ်လောင်း တစ်ဦးတည်းသာ ရှိပါက ယင်းပုဂ္ဂိုလ်သာ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာမည်ဖြစ်၍ မဲဆန္ဒနယ်အားလုံးကို ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့် ပါတီအနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် အလားအလာကောင်းမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း ၎င်းတို့က ဆက်လက်ဆိုပါသည်။
နိုင်ငံရေးပါတီ တစ်ပါတီသည် အနည်းဆုံး မဲဆန္ဒနယ်သုံးနယ်တွင် မိမိပါတီကို ကိုယ်စားပြု၍ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မှု မပြုနိုင်လျှင် ယင်းပါတီအား မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းကို ပယ်ဖျက်ရမည်ဖြစ်ရာ ယခုကျင်းပသွားမည့် ရွေးကောက်ပွဲများတွင် အနည်းဆုံးမဲဆန္ဒနယ် သုံးနယ်ဝင်ရောက် မယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့် နိုင်ငံရေးပါတီလည်းရှိကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် အမည်စာရင်း တင်သွင်းရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက် ကော်မရှင်အဖွဲ့၏ မဲစာရင်း ထောက်ခံချက်ကိုရယူခြင်း၊ မြို့နယ်တရားသူကြီး အဆင့်ထက် မနိမ့်သည့် တရားသူကြီးတစ်ဦး ရှေ့မှောက်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၀င်ခွင့်မှတ်ပုံတင်ကြေးကို မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်တွင် ပေးသွင်းခြင်း၊ ခရိုင်ကော်မရှင် အဖွဲ့သို့ အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်ရကြောင်း သိရသည်။
လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အမည်စာရင်းတင်သွင်းမှု နောက်ဆုံး နေ့ရက်မှာ သြဂုတ်လ ၃၀ ရက်နေ့ ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အမည်စာရင်းတင်သွင်းလွှာများ စိစစ်မှုကို စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်မှ ၁၀ ရက်အထိ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အမည်စာရင်း တင်သွင်းလွှာများကို ရုပ်သိမ်းလိုက ရုပ်သိမ်းနိုင်သည့် နောက်ဆုံးနေ့ရက်မှာ စက်တင်ဘာလ ၃ရက်နေ့ဖြစ်သည်။
လက်ရှိ၌ နိုင်ငံရေးပါတီ တည်ထောင်ခွင့်နှင့် ဆက်လက်တည်ထောင်ခွင့် လျှောက်ထားသည့်ပါတီ ၄၇ ပါတီရှိသွားပြီဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရေးပါတီ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုပြီးသည့်ပါတီ ၄၂ ပါတီရှိကြောင်း ပြည်ထောင်စုရွေး ကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရှိရပါသည်။
ထို့ပြင် နိုင်ငံရေးပါတီများ သည် ၎င်းတို့၏ ပါတီဝင်အင်အား စာရင်းကို ပြည်ထောင်စုရွေးကောက် ပွဲကော်မရှင်သို့ တင်ပြလျက်ရှိရာ လက်ရှိ၌ နိုင်ငံရေးပါတီ ၃၂ ပါတီ ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့တွင် လွှတ်တော် အသီးသီး အတွက်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် က သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
နိုင်ငံရေးပါတီအချို့၏ လွှတ်တော်အသီးသီး၏ မဲဆန္ဒနယ်များအတွက် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အမည်စာရင်းတင်သွင်းနိုင်မှု
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ်_ မျှော်မှန်း (၁၁၆၃ )ရလဒ် ၁၁၀၀ကျော်
တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ _ မျှော်မှန်း (၁၀၀၀)ကျော် ရလဒ် ( ၉၇၅)
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ _ မျှော်မှန်း ( ၂၅၀) ရလဒ် (၁၆၀ခန့်)
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ _ မျှော်မှန်း (၁၈၀) ရလဒ် (၁၅၇)
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားလူငယ်များ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ)နှင့်
ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးအဖွဲ့ချုပ် _ မျှော်မှန်း(၁၅၀) ရလဒ်( ၉၀) ခန
ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(မြန်မာ) မျှော်မှန်း( ၁၀၀) ခန့် ရလဒ်( ၆၀ )ခန့်
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများတိုးတက်ရေးပါတီ မျှော်မှန်း(_ ) ရလဒ်( ၄၀)ကျော်
ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ_ မျှော်မှန်း(၄၅ )ခန့် ရလဒ်(၄၀ )ခန့်
ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ _မျှော်မှန်း(၄၄) ရလဒ်( ၄၄)
ပြည်ထောင်စုဒီမိုကရေစီပါတီ_ မျှော်မှန်း(၃ ) ရလဒ်( ၃)
မတူကွဲပြားခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ _ မျှော်မှန်း (၃ ) ရလဒ်(၇)
ဒီမိုကရေစီနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ _မျှော်မှန်း( ၉) ရလဒ်( ၈)
၀ံသာနု NLD (ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ) _မျှော်မှန်း(၂၅) ရလဒ်( ၅)
မှတ်ချက် ။ ။ သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့အထိ ရရှိခဲ့သောအရေအတွက်ဖြစ်ပြီး အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အရေအတွက် အနည်းငယ် အပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်ပါဆိုသောသတင်းအား eleven. ဂျာနယ် တွင်ဖော်ပြထားပါသည်.။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Wednesday, September 01, 2010 Links to this post
စစ်အာဏာပိုင်များက ရွေးကောက်ပွဲစည်းရုံးရေးအတွက် အစည်းဝေးများပြုလုပ်
ရန်ကုန်တိုင်း၊ ကမာရွတ် မြို့နယ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးများ ပြုလုပ်ရန်အတွက် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း မြို့ခံတဦးက ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် (၂၉) ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက ကမာရွတ်မြို့နယ် အထက(၅) ကျောင်းတွင် ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးအပါအဝင် ဆရာ၊ ဆရာမများပါဝင်ကာ ရွေးကောက်ပွဲနှင့်သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ ဆွေးနွေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“အဓိက ဆွေးနွေးတာက မဲရုံကိစ္စ၊ နောက်ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးက မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကိစ္စတွေကို ဆွေးနွေးတာ၊ နေလည်ပိုင်းလောက်မှာ ပြီးသွားတယ်” ဟု မြို့ခံက ပြောသည်။
အစည်းအဝေးသို့ ပညာရေးဝန်ထမ်းများ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ဝင်များနှင့် မြို့နယ်အာဏာပိုင်များအပါအဝင် လူပေါင်း (၁၅၀)နီးပါး တက်ရောက်ခဲ့သည်။ထို့အပြင် စစ်အစိုးရ အာဏာပိုင်များအနေဖြင့် လူထုဆန္ဒပြပွဲများ ဖြစ်ပေါ်လာပါက ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် လုံထိန်းရဲများကို စခန်းချထားကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ခံတဦးက ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂ ရက်ခန့်မှ စတင်၍ ရန်ကုန်တိုင်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်နှင့် ကျောက်တံတားမြို့နယ်များတွင် ရာနှင့်ချီသည့် လုံခြုံရေး ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို အသီးသီးနေရာချထားခြင်း ဖြစ်သည်။“ဒဂုံမြို့နယ်ထဲက အမျိုးသားပြတိုက်ဘေးကပ်ရပ်ခြံထဲမှာရယ်၊ အရင်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးရုံးဝန်းထဲမှာရယ် နောက် ရန်ကုန်ပြည်လမ်းပေါ်ရှိ လွှတ်တော် အဆောက်အဦဝင်းထဲမှာ ချထားတာ” ဟု မြို့ခံက ပြောသည်။
အဆိုပါ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများမှာ ရန်ကုန်တိုင်း၊ မှော်ဘီရဲတပ်ရင်း အမှတ်(၅)နှင့် (၆)တို့မှ ရဲဝန်ထမ်းများဖြစ်ကြောင်း ၎င်းမြို့ခံက ဆက်ပြောသည်။လုံခြုံရေးချထားသည့် စခန်းတခုတွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် အင်အား (၂၀၀) ခန့်နှင့် ရဲကား (၈)စီးထားရှိကြောင်း မြို့ခံက ပြောသည်။
မြန်မာပြည်တွင်းဂဏန်းခုနစ်လုံးရှိလိုင်းဖုန်းများ အများပြည်သူသို့ စတင်အသုံးပြုခွင့်ပေး
ယခင်ကအသုံးပြုခွင့်ပေးခဲ့သည့် ဂဏန်းခြောက်လုံးရှိ လိုင်းဖုန်းများနေရာတွင် ဂဏန်းခုနစ်လုံးရှိ လိုင်းဖုန်းများကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ အချို့မြို့နယ်များတွင် စတင်အသုံးပြုခွင့်ပေးလျက်ရှိကြောင်း မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။ ထိုဖုန်းများကို တောင်ဥက္ကလာပ၊ သင်္ဃန်းကျွန်းနှင့် တောင်ဒဂုံအစရှိသော မြို့နယ်များတွင် စတင်အသုံးပြုခွင့်ပေးလျက်ရှိပြီး ကနဦးတပ် ဆင်ခအဖြစ် ကျပ်ဆယ်သိန်းငါးသောင်းကျသင့်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါဖုန်းလိုင်းများကို လက်ရှိတွင် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၏ အိတ်စ်ချိန်းရုံးများရှိသော မြို့နယ်များအတွက် အဓိကထား ချထားပေးခြင်းဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အတွင်း နေထိုင်သူများ လျှောက်ထားအသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
လျှောက်ထားလိုသူများအနေဖြင့် မိမိနေထိုင်ရာမြို့နယ်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ၊ မှတ်ပုံတင်နှင့် သန်းခေါင်စာရင်းတို့အား မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းသို့ တင်ပြလျှောက်ထားနိုင်သည်။ အဆိုပါ ဂဏန်းခုနစ်လုံးပါ လိုင်းဖုန်းများသည် ရန်ကုန်မြို့ကုဒ်နံပါတ်ဖြစ်သည့် ၀၁ နောက်တွင် ၈၅ နံ ပါတ်ဖြင့်စသော ဖုန်းများဖြစ်ပြီး ဖုန်းအထွက်ခေါ်ဆိုခမှာ တစ်မိနစ်လျှင် ၁၅ ကျပ်ဖြစ်ကာ အ၀င်ခေါ်ဆိုခ ပေးဆောင်ရန်မလိုကြောင်း သိရသည်။ ယခင်က ချထားပေးခဲ့သည့် လိုင်းဖုန်းနံပါတ်များတွင် ဂဏန်းခြောက်လုံးသာ ပါဝင်ကြောင်းကို ပလက်နက် ဂျာနယ် တွင် ဖော်ပြပါရှိသည်.။
လူထု စိန်ဝင်း ပြောတဲ့ စိတ်ဆိုးရင်လည်း မတတ်နိုင်တော့ဘူး
ဒီနေ့မြန်မာသရုပ်ဆောင်အများစုရဲ့ သရုပ်ဆောင်ပုံတွေဟာ ဇာတ်ခုံပေါ်မှာ သရုပ်ဆောင်တာနဲ့ အတူတူလိုဖြစ်နေတာ သတိထားမိတယ်။ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်နဲ့လုံးဝမတူပါဘူး။ မျက်နှာအမူအယာတစ်မျိုးတည်းနဲ့ အလွမ်း၊ အသော၊ အချစ်၊ အကြမ်း၊ အရမ်းအမျိုးမျိုး သရုပ်ဆောင်ပြနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ရုပ်ရှင်မင်းသားကျော်ဆွေလို သရုပ်ဆောင်မျိုး တစ်ယောက်မှမရှိဘူးလို့ပြောရင် လွန်မယ်မထင်ဘူး။
အဲဒါကြောင့်အနုပညာလို့ ခေါ်လောက်တဲ့အဆင့်မရောက်သေးဘူး။ဖျော်ဖြေရေးအဆင့်လောက်ပဲ ရှိသေးတယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ။ စိတ်ဆိုးကြရင်လည်း မတတ်နိုင်တော့ဘူး။
မောင်တစ်ထမ်း + မယ်တစ်ရွက် = ၂၉နှစ်ပြည့်မြောက်
၃၁.၈.၂၀၁၀ (အင်္ဂါ) နေ့ရက်သည် မြတ်ဗုဒ္ဓအလိုကျ ဗြဟ္မစိုရ်နှလုံးသားနှင့် လူမှုခရီး သွားနေကြသော နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ဥက္ကဌ ဦးကျော်သူနှင့် ဇနီး ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်ဖေ (ခ) ဒေါ်ရွှေဇီးကွက်တို့၏ မင်္ဂလာခရီး (၂၉) နှစ်မြောက် အချိန်ကာလဖြစ်သည်။ ယင်းနေ့တွင် နာရေး ကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)ရှိ သုခအဟာရ စားသောက်ဆိုင်တွင် ၀န်ထမ်းများ၊ လုပ်အားပေး အသင်းသူ/ သားများ၊ ဖိတ်ကြားထားသော အနုပညာသမားများ၊ ဧည့်သည်တော်များ၊ အလှူရှင်များကို သီးစုံ ထောပတ်ထမင်း၊ ကြက်သားဟင်း၊ ရေခဲမုန့်၊ အချိုရည်တို့ဖြင့် ဧည့်ခံကျွေးမွေး ဒါနပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အသင်းသူ/သားများမှလည်း တက်ညီလက်ညီဖြင့် ၀ိုင်းဝန်း ဧည့်ခံကြိုဆိုခြင်း၊ အစားအသောက်များကို တည်ခင်း ဧည့်ခံပေးခြင်း၊ ပန်းကန် ခွက်ယောက်များကို ဆေးကြောသန့်စင်ပေးခြင်း တို့ကို လူမှုရေး စိတ်ဓါတ် အပြည့်အ၀ဖြင့် ပံ့ပိုးကူညီပေးခဲ့ကြသည်။ ထိုအခမ်းအနားတွင် ဦးကျော်သူ၏ မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်မြသန်းမှလည်း ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ စကားပြောကြားကာ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့၊ အသင်းသူ/သားများ၊ ပန်းချီဆရာများ၊ ဧည့်သည်တော် များထဲမှ တစ်ဦးချင်း မင်္ဂလာဆုတောင်း စကားများကိုပြောကြားပြီး အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပစ္စည်း များကို ဦးကျော်သူနှင့် ဒေါ်ရွှေဇီးကွက်တို့အား ပေးအပ်ကြသည်။ ထို့ပြင် အလုပ်မအားလပ်၍ မလာနိုင်သော ကဗျာဆရာ ကိုစောဝေမှ ပန်းချီကားချပ်နှင့် “မောင်တစ်ထမ်း + မယ်တစ်ရွက် = ၂၉” ကဗျာအား အမှတ်တရ ရေးသားပေးပို့လိုက်ကာ စာရေးဆရာမ ဒေါ်သန်းမြင့်အောင်မှ ရွတ်ဆိုပေးခဲ့ ပါသည်။ ဦးကျော်သူ + ဒေါ်ရွှေဇီးကွက်တို့မှလည်း ကျေးဇူးတင်စကား ပြန်လည်ပြောကြား ခဲ့ရာတွင် ဦးကျော်သူမှ “ယခုကဲ့သို့ မိမိတို့၏ မင်္ဂလာ (၂၉) နှစ်မြောက်ကို ကြွရာက်အားပေး ချီးမြှင့်ခြင်းကို ကျေးဇူးအထူး တင်ရှိပါကြောင်း၊ မိမိတို့သည် ဤလူမှုရေးလုပ်ငန်းကို အများပြည်သူတို့ လှူဒါန်းငွေတို့ ဖြင့် ဒုက္ခရောက်နေသော အများပြည်သူတို့အား ပံ့ပိုးကူညီ ဖေးမပေးဆပ်ခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း။ မိမိမှာ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း မလုပ်ရသည်မှာ (၃) နှစ်ရှိပြီ ဖြစ်ပါ၍ မိမိကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေ မရှိပါကြောင်း သို့သော် မိမိတို့ အလှူပွဲများ၊ ဧည့်ခံပွဲများ ယနေ့တိုင်ပြုလုပ် လှူဒါန်းနိုင်သည်မှာ ကျွန်တော်တို့၏ မိဘများ အားကိုးနှင့်သာ လှူဒါန်းနိုင်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ (၂၉) နှစ်မြောက် အခမ်းအနားကိုလည်း ကျွန်တော်၏ မိဘနှစ်ပါးဖြစ်သော ဦးစိန်တင် + ဒေါ်မြသန်း တို့မှ မင်္ဂလာပွဲ လက်ဆောင်အဖြစ် ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ငွေဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း” ပြောကြားသွားသည်။ နေ့လည် (၂း၀၀) နာရီ အချိန်တွင် ကွယ်လွန်သူ ဦးလှမြင့် အသက် (၈၁) နှစ်၏ နာရေး လမ်းကြောင်းကို ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး အအေးခန်းမှ ရေဝေးသုဿန်သို့ (၂၉) နှစ်မြောက် မင်္ဂလာ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဦးကျော်သူ + ဒေါ်ရွှေဇီးကွက်တို့သည် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) အသင်းသူ/သားများ နှင့်အတူ လိုက်လံပို့ဆောင် သင်္ဂြိုလ်ပေးခဲ့ပါသည်။
ပေးပို့ ပေးသော အကို ကိုကျော်သူ နှင့် အမ မရွှေဇီးကွက် အားကျေးဇူး တင်ရှိပါသည်.။
အကို ကိုကျော်သူ နှင့် အမ မရွှေဇီးကွက် တို့ဇနီးမောင်နှံ မြန်မာပြည်သူများရဲ့ လူမှုရေး ကိစ္စ အဝဝ ကို ပိုမိုဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေလို့ ညီမ မြတ်လေးငုံ မှ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်..။
နအဖအာဏာပိုင်ထိပ်တန်း ဥိးသန်းရွှေ ရာထူး ထွက်မထွက်
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်း ရွှေနဲ့ ဒုဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေးအပါအဝင် စစ်အစိုးရ ထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင် တွေ ရာထူးက နှုတ်ထွက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့်ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် ဒီနေ့ထုတ်သတင်းစာတွေထဲမှာ တော့ နအဖ ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေက မလေးရှား လွတ်လပ်ရေးနေ့အတွက် သဝဏ်လွှာပေးပို့တဲ့ အကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့ကစပြီး စစ်အစိုးရခေါင်း ဆောင်တော်တော်များများ ရာထူးနှုတ်ထွက်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းဟာ အသစ်ခန့်ထားတဲ့သူတွေရဲ့နာမည်စာရင်းနဲ့တကွ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေ့သတင်းစာမှာတော့ အပြောင်းအလဲစာရင်းမှာ ပါတဲ့အတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူးနေရာမှာ တိုင်းမှူးအသစ် ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းသန်းနာမည်ကို ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပေမယ့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေရဲ့နာမည်မှာတော့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ဆိုတဲ့ ရာထူးအမည်စာလုံးကို ဆက်လက်သုံးစွဲထားပါတယ်။
ဒီတော့ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေဟာ နအဖ ဥက္ကဌနေရာနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးရာထူးကိုတော့ ဆက်လက် ရယူထားဆဲဆိုတဲ့ အဓ်ိပါယ်သက်ရောက်နေပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေဟာ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နေရာမှာ ဆက်လက်ပြီး ရှိနေသေးသလား မရှိတော့ဘူးလားဆိုတဲ့ အချက်ကိုတော့ အခုချိန်ထိ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရသေးပါဘူး။
ယခုတလော သူခိုးလူပြန်ဟစ်သည့်ဖြစ်ရပ်များ လူလိမ်လောကမှာံသအ ဖြစ်နေပါတယ်။ လူလိမ်တွေဟာ များသောအားဖြင့် အမျိုးသမီးများ ဖြစ်နေတတ်ပြီး အလိမ်ခံရတဲ့သူတွေဟာ လူငယ်၊ လူလတ်ပိုင်း အမျိုးသား အများစု ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။ လိမ်ပုံလိမ်နည်းလေးကတော့ ပိုက်ဆံအိတ်ခပ်ဖောင်းဖောင်းကို ကိုင်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ် ခါးကြားထိုးလာတာပဲဖြစ်ဖြစ် ပိုက်ဆံအိတ်ပါလာ တဲ့အမျိုးသားဆီကို လိမ်မည့်အမျိုးသမီးက ကပ်သွားပြီးပိုက်ဆံအိတ်ကို လုလိုက်ပြီး ပါးစပ်မှလည်း 'ဟင် ဒါဘာလုပ်တာလဲ ကျွန်မပိုက်ဆံအိတ်ကို လွှတ်စမ်း'ဆိုပြီး အော်ပါသေးတယ်။
အဲဒီ့အော်သံပေးလိုက်တာနဲ့ လူလိမ် အမျိုးသမီးနဲ့ အပေါင်းအပါတွေက ဝိုင်းလာပါတော့တယ်။ ပိုက်ဆံအိတ် ပိုင်ရှင်အမျိုးသားလည်း ကိုယ့်ပစ္စည်းအမှန်ဖြစ်ပါလျက်နဲ့ ကြောင်အ အဖြစ် အီး အီး အဲ အဲဖြစ်နေတုန်း ထိုအမျိုးသမီးက ပိုက်ဆံအိတ်ယူပြီး လစ်သွားပါပြီ။ ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့သူတစ်ဦးက ''အဲဒီ့နေ့က လခထုတ်ရက်ဆိုတော့ ကျွန်တော့်ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ လေးသောင်းခွဲလောက်ပါပါတယ်။ ပိုက်ဆံအိတ်ကိုဘောင်းဘီနောက် အိတ်ထဲထည့်ထားမိတယ်။ ဆူးလေပွိုင့်နားရောက်တော့ အသက်(၃ဝ) ဝန်းကျင်လောက် အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ကျွန်တော့်ပိုက်ဆံအိတ်ကို ဆွဲယူလိုက်တယ်ဗျ။
ကျွန်တော်ပြန်လုတော့ သူက'ရှင်ဘာလုပ်တာလဲ ကျွန်မပိုက်ဆံအိတ်ကိုလွှတ်စမ်း'လို့ အသံအကျယ်ကြီးနဲ့အော်တော့ ကျွန်တော့်ဘေးကို မိုက်ကန်းကန်းရုပ်နဲ့ လူတွေဝိုင်းလာတယ်ဗျ။ ကျွန်တော် လည်း ကြောင်ပြီးပိုက်ဆံအိတ်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်မိတယ်။ ဘေးကလူတွေ ကမင်းဘာလဲညာလဲနဲ့ ဝိုင်းဟောက်နေတုန်း အဲဒီ့မိန်းမလည်း ပိုက်ဆံအိတ် ယူပြီးလစ်သွားရော။ လုပ်စားနေကြတာဗျ။ အတော်ကြောက်ဖို့ကောင်း တယ်'လို့ ကြိတ်မနိုင်ခဲမရဖြစ်နေပုံနဲ့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီအဖြစ်လေးကို နမူနာယူပြီး ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ်ဝိုင်းရိုက်မခံရစေဖို့ ရှိုးပြ တာလည်းကြည့်ပြပေါ့။ ပိုက်ဆံကိုလည်း လုံလုံခြုံခြုံသိမ်းထုပ်ပြီး အန္တရာယ် ကိုကာကွယ်ကြစေချင်ပါတယ် ဆိုပြီ လျှပ်တပြက် ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြပါရှိပါသည်.။
မြန်မာအမျိုးသမီးများနှင့် ရန်ကုန် ဘက်စ်ကား အတွေ့အကြုံ
စစ်အာဏာပိုင်များ၏သတင်းစာ တွင် မောင်သန်းရွှေ အား နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ ဟု ဖော်ပြ
Posted by မြတ်လေးငုံ at Tuesday, August 31, 2010 Links to this post
စစ်တက္ကသိုလ် တွင် ပညာသင်ကြားနေသည့် သူရရွှေမန်း၊ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးသာအေးနှင့်ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြင့်လှိုင်တို့၏ ဆွေမျိုးများနှင့်သားသမီးများDSAမှထုတ်ပယ်
မေမြို့ စစ်တက္ကသိုလ် ဗိုလ်လောင်းများ အား တပ်ပြင်ထွက်ခွင့် ၊ မိသားစု တွေ့ ခွင့် ၊ အင်တာနက်ကြည့် ခွင့် အပါအ၀င် ပြင်ပ နှင့် အဆက်အသွယ်များ ဖြတ်တောက်ထားသည် (ဖြစ်နိုင်သည် မှာ ပြုတ်/နား များ ၏ လူရင်း ကျောင်းသားများ အား ကျောင်းထုတ် ချင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်) ပုံတွင် တွေ့ ရသည် မှာ မေမြို့ စစ်တက္ကသို လ် ဖြစ်သည်။
စစ်/ဆေး ဟု ခေါ် သည့် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဆေးတက္ကသိုလ် တွင် လည်း ကျောင်းသား များ အား ပြင်ပ ကမ္ဘာ နှင့် အဆက်အသွယ် ဖြတ်တောက် ထားသည်။(ပုံတွင် တွေ့ ရသည် မှာ တပ်မတော် ဆေးတက္ကသိုလ်ဖြစ်သည်)
စစ်တက္ကသိုလ် တွင် ပညာသင်ကြားနေသည့် သူရ ရွှေမန်း ၊ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သာအေး နှင့် ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်လှိုင် တို့ ၏ ဆွေမျိုး များ နှင့် နီးစပ် သူများ ၊ သားသမီး များ မှာ DSA မှ ထွက် လိုက်ရပြီ ဖြစ်သည်။
ပေးပို့ ပေးသော ကိုမိုးကျော်သူ အားကျေးဇူး တင်ရှိပါသည်.။
မြန်မာ့ကျောင်းသားများအစည်းအရုံး(ဆန်ဖရန်စစ္စကို-ဘေးဧရိယာ) အဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင်အချို့က ဦးဆောင်လုပ်မဲ့ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့ ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း စတိတ်ရှိုးပွဲ။
ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဘေးဧရိယာ၌ စက်တင်ဘာလ (၄)ရက်နေ့ စနေနေ့တွင် ညနေ(၆)နာရီမှ ည(၁၀)နာရီအထိ မင်းမော်ကွန်း၊ ရဲလေး၊ Lဆိုင်းဇီ၊ ရေဗက္က၀င်းနှင့် ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း တို့မှ တေးဂီတ စင်တင်ဖြေဖျော်ပွဲ ပြုလုပ်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။
၎င်း အဆိုတော်များထဲတွင်ပါဝင်သော ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်းမှာ ၊ ၈၈ အရေးတော်ပုံကြီးနှင့် ဦးသန့်အရေးအခင်း တို့ကိုယုတ်မာစော်ကားစွာပုံဖျက်ထားသော သမိုင်းကြောင်းအတုဖြင့် စစ်အစိုးရ၏ ၀ါဒဖြန့်ချီရေး ဇတ်ကားဖြစ်သော အာရုံဦးမှာ ဖူးသည့်ကြာ ဇတ်ကားတွင် နအဖလက်ပါးစေ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးအဖြစ် တတ်ကြွစွာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သူ တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။
ယခုအချိန်ခါတွင် ၀ိုင်စုခိုင်သိန်းပါဝင်သော စတိတ်ရှိုးပွဲများကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အနယ်နယ်အရပ်ရပ် မြို့များတွင်မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများမှ ၀ိုင်ဝန်းဆန္ဒပြနေကြသည့် သတင်းများလည်း များစွာတွေ့မြင်နေရပါသည်။
ယခု ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း၏ စတိတ်ရှိုးပွဲကိုလည်း ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဘေးဧရိယာရှိ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများမှ အင်တိုက်အားတိုက် ၀ိုင်းဝန်း ဆန္ဒပြကြမည့်ဟု ဘေးဧရိယာမှ သတင်းရရှိပါသည်။
ဆန်ဖရန်စစ္စကို၏ ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း စတိတ်ရှိုးပွဲ ထူးခြားချက်မှာ သာမန်စီပွားရေးသမားများက ပွဲကန်ထရိုက်သွင်း ကျင်းပပြုလုပ်ကြခြင်းမဟုတ်ဘဲ၊ ဒီမိုကရေစီအရေးတိုက်ပွဲဝင်နေသည့် မြန်မာ့ကျောင်းသားများအစည်းအရုံး(ဆန်ဖရန်စစ္စကို-ဘေးဧရိယာ) အဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင်အချို့က ဦးဆောင် ပွဲကန်ထရိုက်သွင်း ကျင်းပကြမည့် စတိတ်ရှိုးပွဲဖြစ်ကြောင်း ဘေးဧရိယာမှ သတင်းရရှိပါသည်။
ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဘေးဧရိယာရှိ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားနေကြသော အင်းအာစုများမှ ဒီမိုကရေစီအမည်ခံ တာဝန်မဲ့သူ အချို့၏ ယင်းကဲ့သို့ မျက်နှာပြောင်တိုက်သော ကိုယ်ကျိုးကြည့် လုပ်ရပ်ကို များစွာဝိုင်းဝန်း ရုတ်ချနေကြကြောင်း ဘေးဧရိယာမှ သတင်းရှိပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ ပူးတွဲပါသော စတိတ်ရှိုးပွဲ လက်ကမ်း ကြော်ငြာကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ၎င်းပွဲ၏ တာဝန်ခံတစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုချစ်ခင်မှာ ကျောင်းသားတပ်မတော် ရဲဘော်ဟောင်းတစ်ဦးနှင့် မြန်မာ့ကျောင်းသားများအစည်းအရုံး(ဆန်ဖရန်စစ္စကို-ဘေးဧရိယာ) အဖွဲ့မှအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ဖြစ်ပါသည်။
ပေးပို့ ပေးသော ကိုမိုးကျော်သူ အားကျေးဇူး တင်ရှိပါသည်.။
ပြည်တွင်းရွေးကောက်ပွဲများ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအတွက် လက်စွဲ....
More on Generation.
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)သည် အများပြည်သူတို့အတွက် ပေးဆပ်ရန် အတူလက်တွဲ ငြိမ်းချမ်းမှု အတွက် အတူပျံသန်းကြသူများ...။
“ငါနေထိုင်ရာဘ၀မှာ ကံကြမ္မာရဲ့ ပြောင်းလဲခြင်းနောက် xxx လိုက်ပါလွင့်မျှောရင်း ငါကိုယ်တိုင် ဖန်တီးဘ၀ xxx အရာထင်ခြင်းများလဲမရှိတော့ ငါကျရှုံးနေ … အတိတ်တွေခြောက်လှန့်နေ ညတွေ ရူးသွပ်နေဆဲလား xxx မနေ့က အတိုင်းပဲလား စိုးရွံ့ခြင်းများစွာနောက်နေ့ ”
အထက်ပါ သီချင်းစာသားကတော့ လူငယ် တေးရေး/တေးဆို- Japan ၏ နာရေးကူညီမှု အသင်း(ရန်ကုန်) အတွက် ကိုယ်တိုင်ရေးသား၍ သီဆိုပေးထားသော “နိဗ္ဗာန်” အမည်ရှိ Hip Hop တေးသီချင်းတစ်ပုဒ်မှ စာသားတချို့ ဖြစ်သည်။
“ မင်းရဲ့ရှေ့မှာ သန်းပေါင်းများစွာ သွားလိုက်ကြ ဒီလမ်းမှာ xxx မင်းလည်းတစ်နေ့မှာ သန်းပေါင်းများစွာ ထဲကတစ်ယောက် ဖြစ်ဦးမှာ ”
အထက်ပါ သီချင်းသည်လည်း လူငယ်များဖြစ်ကြသော တေးရေး - ဖိုးလ၊ တေးဆို - Alta တို့မှ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)အတွက် ရေးသား သီဆိုပေးထားသော “ခေါင်းလောင်းသံ” အမည်ရှိ တေးသီချင်းတစ်ပုဒ်မှ စာသားတချို့ ဖြစ်သည်။
ပေးပို့ ပေးသော ကိုကျော်သူ အား ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.။
မြန်မာပြည်မှာ ခုတလော နာမည်ကြီး နေတဲ့ PRIVATE SCHOOL ရဲ့ လိမ်ညာမှု
မြန်မာပြည်မှာ ခုတလော နာမည်ကြီးနေတဲ့ PRIVATE SCHOOL ရဲ့လိမ်ညာမှု
PRIVATE SCHOOL တွေဖွင့်တော့ M.Sc M.A ရထားတဲ့ မိန်းကလေး တော်တော် များများ ၀မ်းသာ ကြပါတယ်။ PRIVATE SCHOOL တွေက M.Sc M.A ရထားတဲ့ သူတွေကို ဆရာမ အဖြစိ STUDY GUIDE အဖြစ် ခန့်မယ်လို့ SEVEN DAYS NEWS ဂျာနယ်မှာအတိအလင်းပြောထားတာကိုဖတ်ခဲ့ရလို့ပါ။ အဲဒီထဲမှာ ကျွန်မလဲ တစ်ယောက်အပါအ၀င်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်မက M.Sc ရထားတဲ့သူတယောက်ပါ ။မဟာမြကျွန်းသာ (MMAC) ဆိုတဲ့ ကျောင်းက M.Sc M.Aတွေကို ဆရာမအဖြစ် STUDY GUIDE အဖြစ်ခေါ်ပါတယ်။ကျွန်မလဲ ၀င်လျှောက် ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာမအဖြစ်အရွေးခံရပါ တယ်။ အရမ်း နာမည် ကြီးနေတဲ့ ကျောင်းမို့အရမ်း အထင်ကြီးပြီး လျှောက်ခဲ့တာပါ။ နေစရာ၊ စားစရာပေးပြီး၊ လစာကို (၄၅၀၀၀ မှ ၈၀၀၀၀ )ထိပေးမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်မတို့လိုပညာသာတတ်ပြီး၊ကိုယ့်ဝမ်းစာကိုကိုယ့်ဘာသာရှာစားနေရတဲ့ မိန်းကလေးတွေ အတွက်တော့မဟာ အခွင့်အရေးပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒါတွေက အိမ်မက်ပဲ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ အလုပ်လျှောက်လွှာကို လက်ခံတဲ့ နေရာက ၆မိုင်ခွဲမှာရှိတဲ့မူကြို တစ်ခုမှာပါ။ မူကြို ကလဲ စင်ကာပူ သင်ရိုး အတိုင်းသင်တဲ့ မူကြိုမို့ အထင်ကြီး စရာအင်မတန်ကောင်းပါတယ်။ မူကြိုတောင် ဒီလောက် အဆင့်မြင့် ရင် PRIVATE SCHOOL က ပိုတောင် သားနား မယ်လို့ ထင်ခဲ့ ပါတယ်ရှင်။
ဒါနဲ့ပဲ ကျွန်မ အရွေးခံရပါတယ်။ အလုပ်အတွက် စာချုပ်ချုပ် ရမယ်လို့ပြောပါတယ်။တလကို(၄၅၀၀၀)နဲ့(၃)နှစ် စာချုပ်ရပါတယ်။စာချုပ်ထဲမှာလဲ ကျောင်းသားတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်တွေ သာပါပြီး သင်ကြားရေး တာဝန်ခံ ဆရာမဆိုတဲ့ရာထူးနဲ့ချုပ်တာပါ။ စာချုပ်ချုပိပြီးတာနဲ့မြရိပ်မာလာ ဆိုတဲ့အဆောင်ကို ခေါ်သွားပါတယ်။ အဲဒီမှာ စပြီး တွေ့တာပါပဲ။
ပေ(၁၀၀)ပတ်လည်တောင် မရှိတဲ့ ခြံဝင်းထဲမှာ နှစ်ထပ်တိုက်၂လုံး၊ဂိုထောင်လိုလိုအခန်း (၂)ခန်း၊ စာသင်ဆောင်(၂)ခု နဲ့ ရေကန် (၁) ကန်တွေ့ရပါတယ်။နှစ်ထပ်တိုက် (၂)လုံးကတော့ ကျောင်းသူတွေနေတဲ့ အဆောင်ပါ။ ဂိုထောင် လိုလို အခန်း ကတော့ ဆရာမများ အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
ဂိုထောင်တခုမှာ ဆရာမ (၄) ယောက်နေရပါတယ်။ မိုးတွင်း ရောက်ရင် ခုတင်ခြေထောက်ထိ ရေမြုပ်တဲ့ အခန်းတွေပါ။
ကျွန်မတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဖိနှိပ်မှုနဲ့ချူပ်ချယ်ခံရမှု များကိုအောက်မှာ ဆက်ရေးထားပါတယ်။
(၁)တိုးတတ်နေတဲ့ခေတ်ထဲမှာမည်သည့် သတင်းစာ မှ မဖတ်ရ။
(၃)(MP3 )(MP4 )လက်ကိုင်ဖုန်းသုံးခွင့်မပြု။
(၄)မိမိ မိသားစု အသိုင်းအ၀ိုင်းကမိမိထံသို့ဖုန်းဆက်ခွင့်မရှိပါတဲ့။လာရောက်တွေ့ခွင့်မရှိပါ။
(၅)သန့်ရှင်းရေးနဲ့ပန်းပင် ရေလောင်း တာကို အလှည့်ကျလုပ်ရပါတယ်။
(၆)ညဘက် ရေတင်တာ ကိုအလှည့်ကျ စောင့်ရပါတယ်။ (ကျောင်းသူများရဲ့ ရေချိုးခန်းထဲကိုထည့်တာပါ)
(၇)ကျောင်းသူများရဲ့အခန်းကို ROOM SERIVE ၀င်ပေးရ ပါတယ်။
(၉)ဆရာမများ တနေ့ကိုရေတခါပဲ ချိုးရမယ်လို့စည်းကမ်း ထုတ်ထားပါတယ်။
ရေချိူးရတဲ့ နေရာကို ပြောပြ ပါမယ်။
လူနှစ်ရပ် လောက်ရှိတဲ့ ရေကန်နဲ့ခြံစည်းရိုး အုတ်နံရံကြား လူတကိုယ်ဝင်စာ ရှိတဲ့ နေရာမှာ ရေချိုး ရတာပါ။ လူနှစ်ရပ်လောက်ရှိတဲ့ ရေကန်မှာ ရေက တစ်တောင်လောက်ပဲ ရှိတာကို ပုံးမှာကြိုး တပ်ပြီး ငင်ချိုးရတာပါ။ မျက်နှာသစ်ဖို့ရေက အမှိုက်တွေနဲ့သံချေးရေပါ။ တစ်နှစ်ပတ်လုံး မိုးတွင်းက လွဲလို့ကျန်တဲ့ အချိန်တွေမှာ ဒီလိုပဲ သုံးရပါတယ်။ ဒါဟာ လိမ်ညာမှုပါပဲ။
ဒါဟာ အိမ်အကူတွေ လုပ်ရတဲ့ အလုပ်မျိူးတွေပါ။ ဆရာမ ဆိုတဲ့ နာမည်တပ်ပြီး အိမ်အကူ လုပ်ခိုင်းချင်း တာပါ။စာချုပ်မှာ မပါတဲ့ အချက်တွေကို အခိုင်းခံရပေမယ့် စာချုပ်ဆိုတာကြီးကို ကြောက်လို့ မထွက်ရဲတဲ့ သူတွေအများကြီးပါ။ မဟာမြကျွန်းသာဆိုတဲ့ ဒီ PRIVATE SCHOOL ကပညာတတ် အမျိုးသမီးတွေကို ပြင်ပနဲ့အဆက်အသွယ် ဖြတ်တောက်ပြီး အကျဉ်းချကျွန်ပြုထားတာ ပြည်တွင်း လူကုန်ကူးမှု လို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်။
တိုးတက်နေတဲ့ နည်းပညာ ခေတ်ကြီးထဲမှာသတင်းစာ မဖတ်ရဆိုတာ တော်တော် ဆိုးဝါးတဲ့ အချက်ပါ။ စီးပွားရေး အရကြည့် ရင်လဲ ပိုက်ဆံ ရစရာရှိတဲ့ ကျောင်းသူ တွေကိုတော့ ကောင်းကောင်း ထားပြီး၊ပိုက်ဆံပေးရမယ့် ဆရာမ (တနည်းဝန်ထမ်း၊ အလုပ်သမား )ကိုတော့ ဖိနှိပ်ထားတာ အရင်းရှင် စနစ်ကို ကျင့်သုံးတာပါပဲ။
အရမ်းကောင်းပြီးအဆင့်မြင့်ပါတယ်လို့နာမည်ကြီးနေတဲ့ မဟာမြကျွန်းသာ PRIVATE SCHOOL ကိုတော့ ပညာတတ်မိန်းကလေးများမလျှောက်မိပါစေနဲ့။အမှားကြီးမှားမှာစိုးရိမ်လို့ပါ။ နီးစပ်ရာ သူငယ်ချင်းများကို ပြော ပြပြီး forward လုပ်ပေးကြပါလို့အကူအညီ တောင်းပါတယ်။
ဝန်ကြီးဌာန အဆောက်အအုံများကို ပုဂ္ဂလိက စီးပွားရေး အဖ...
မဲဆောက်တွင် မြန်မာအလုပ်သမား (၇၀၀) ခန့် ဖမ်းဆီးခံခဲ...
တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွှတ်ရေးပါတီ ဒေသ ခေါင်းဆောင်...
ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့တွင် အရုဏ်ဦးမှာ ဖူးသည့်ကြာ ရုပ်...
မကြောက်တရားနဲ မဲမပေးကြဖို့ ဦးဝင်းတင် ပြည်သူကိုထပ်...
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) နှင့် မြန်မာပြည်သူတွေအတ...
မြန်မာနိုင်ငံ စာပေနှင့်စာနယ်ဇင်း အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ဒု...
ရှမ်းပြည်နယ် မိုင်းယန်းမြို့နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ်ဘီ...
၂၀၁၁ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုကြမည့် ကျောင...
ပဲခူးမြစ်ရေ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ကျဆင်းလာ...
လူ့အခွင့်အရေး မှတ်တမ်း ကွန်ယက်အဖွဲ့ ND – Burma က အ...
Press Release - ND-Burma Arbitrary Taxation Report...
ဆုရတာက နအဖ ဘက်တော်သားများ ပါးစပ်အပြောနဲ့ကယ်ဆယ်နေ...
ဗိုလ်မောင်အေး၊ ဗိုလ်ဌေးဦး နဲ့ အသစ် ကလေးများ.....
တာချီလိတ် အာဏာပိုင်များ၏ နိုင့်ထက်စီနင်း ပြုမှုအား...
အနုပညာသမားများ … ပွေ့ဖက်ထား နှင့် ပင်အိုရွက်နုသင်...
ဗဟိုကော်မတီ ကချင် အထူးဒေသ (၂)၊ ကေအိုင်အို ထုတ်ပြန...
စစ်အာဏာပိုင်များက ရွေးကောက်ပွဲစည်းရုံးရေးအတွက် အစည...
လူထု စိန်ဝင်း ပြောတဲ့ စိတ်ဆိုးရင်လည်း မတတ်နိုင်တော...
မြန်မာအမျိုးသမီးများနှင့် ရန်ကုန် ဘက်စ်ကား အတွေ့အြ...
စစ်အာဏာပိုင်များ၏သတင်းစာ တွင် မောင်သန်းရွှေ အား နို...
စစ်တက္ကသိုလ် တွင် ပညာသင်ကြားနေသည့် သူရရွှေမန်း၊ဒုဗို...
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)သည် အများပြည်သူတို့အတွက် ...
မြန်မာပြည်မှာ ခုတလော နာမည်ကြီး နေတဲ့ PRIVATE S...
နအဖ စစ်အာဏာပိုင်များပြောင်းလဲမှု စာရင်းနှင့် ရာထူး...
မဟာချိုင် မှ မြန်မာအလုပ်သမား များ၏ ရင်ဖွင့်သံ
ရန်ကုန်တိုင်း ရဲမွန်မြို့တပ်ရင်း ( ၈ ) ရင်းရဲ့ တပ်...
၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ့် အမတ်လောင်းတွေ လျှောက်လွှာတင...
အာဏာရူးကြီး မှူးကြီးသန်းရွှေ ၏ အလောင်းစည်သူဘွဲ့နှင...
မြန်မာပြည်တွင်း တယ်လီဖုန်းဖြင့် လိမ်လည် မှုများပို...
မြန်မာပြည်က ပုဒ်မ ၄၁၇ နှင့် နစ်နာနေရသော မြန်မာအမျိ...
NLD ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦးနဲ့ ဗဟိုကော်မီတီဝင်တချို့ မြစ်...
ဦးသန်းရွှေ အပြောင်းအလဲ နဲ့ နယ်ခြားစောင့်တပ်ဂယက်
၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် မဲပညာပေး လုပ်ဆောင်ရန် ပ...